ကြော်တတ်တယ်..လှော်တတ်တယ် (ဇာတ်သိမ်း) – Nya Hmwe Pann
ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းနေ့ ..ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ မှာ လူတော်တော်လာကြ သည် . .။ ဆူရှီလုပ်ငန်းရှင် ဖြူသီခိုင် လဲ လာ သည် . .။ သူ့ကောင်လေး စောကျော် နဲ့ . .။ ဖြူသီခိုင် က အော်ကြီး ကို အ ထူး ခင်မင်အရေးပေး ဆက်ဆံလို့ စောကျော် ရဲ့ မျက်နှာ သည် မကျေနပ်ကြောင်း သိသာလှ သည် . .။ လူတွေ စားသောက်နေခိုက် ဆိုင်ထဲကို မိန်းမတယောက် ၀င်လာ သည် ..။ ရဲစုံထောက်မလေး နာတာရှာကွမ်း . .။
အဖြူရောင် စပို့ရှပ်လက်ရှည် ကျပ်ကျပ်..ဂျင်းဘောင်းဘီအနက် ကျပ်ကျပ် ၀တ်ထားလို့ သူမကိုယ်လုံး အလှက ပေါ်လွင်နေ သည် ..။ ညာဘက်ခါး မှာ သေနတ်တလက် ကို သားရေ သေနတ်အိတ် နဲ့ ချိတ်ထား သည် . .။ ဘယ်ဘက်ခါးက ခါးပတ်မှာ ရွှေရောင်ရဲတံဆိပ်လေး ချိတ်ထား သည် . . .။ သက်ထား က နာတာရှာကွမ်း ဧည့်ခံ သည် ..။ သက်ထား နဲ့ နာတာရှာကွမ်း ခင်မင်သွားကြ သည် . .။ “ ကိုသက်ပြင်း ..မြန်မာ စတီဗင်ဆီးဂါးလ် တယောက်ကော ..” သက်ထား လဲ နာတာရှာ က အော်ကြီး ကို မေးမှန်း ချက်ချင်းသိ သည် ..။ အော်ကြီး က ဆံပင်ကို အနောက်မှာ စတီဗင်ဆီးဂါးလ် လိုဘဲ စု ချည်ထားတတ်လို့ . .။ အော်ကြီး က ဧည့်သည်တွေ စားဖို့ မီးဖိုထဲမှာ ချက်ပြုတ်နေ သည် . .။ နာတာရှာ က ..“ သူမအားရင် ရတယ်..ငါဘဲ သွားတွေ့လိုက်မယ် ..” ဆိုပြီး မီးဖိုထဲ ၀င်သွား သည် . .။
“ဟေး…AWW…How are you? Long time no see …” “ ဟေး..နာတာရှား ..” အော်ကြီး နဲ့ နာတာရှာ အော်ကြီး ချက်ကြော်နေတုံး ..စကားပြောကြ သည် . .။ နာတာရှား ကို အော်ကြီး က အထူး စပယ်ရှယ်ဟင်းများ ချက်ကျွေး သည် . .။နာတာရှား က သူမအကြောင်း တစိတ် တဒေသ ပြောပြ သည် . .။ သူမ မိဘတွေ က ဗီယက်နမ်မှ လာကြသော တရုတ်လူမျိုးတွေ ဖြစ်ပြီး သူမ က နယူးရောက်မှာ မွေး ပြီး ကြီးပြင်းခဲ့တာ ပြောပြ သည် ..။ အော်ကြီး ကို သူမ က “ဟီးရိုး ရှက်ဖ် ” ဆိုပြီး ခေါ်ဆိုကြောင်း ..သေနတ် ရှိတဲ့ မုဒိန်ဒကောင်တွေ ကို ဘေ့စ်ဘောလ်ဒုတ် နဲ့ တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ သတ္တိ ကို ချီးကျူးနေ သည် . .။ သူမ က အော်ကြီး သေနတ်ပစ်ချင်ရင်သင်ပေးမည် ..ဒီ နယူးရောက်မြို့မှာတော့ သေနတ် ကိုင်ခွင့် မရှိပေမဲ့ တနေ့ လိုအပ်လာရင် အသုံးဝင်အောင် လို့ ပြော သည် . .။ အော်ကြီး လဲ သေနတ်ပစ်ရမှာထက် အလွန် တောင့်တင်း ဖြူဝင်း စိုပြေတဲ့ ရဲစုံထောက်မ လေး နဲ့ နီးကပ်ရမှာကို စိတ်ဝင်စားပြီး သင်ချင်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါ သည် . .။
နာတာရှာကွမ်း ပြန်သွားပြီးနောက် ဆူရှီသူဌေး ဖြူသီခိုင် သည် မီးဖိုထဲ မှာ ချက်နေတဲ့ အော်ကြီးဆီ ၀င်လာ သည် ။ “ ကိုအော်ကြီး . . .” “ မမခိုင် …” “ ကိုအော်ကြီး..ပိတ်ရက် တရက်ရက် မှာ မမ အိမ်မှာ လာချက်ပေးပါလားဟင် . .” “ ရတယ်လေ . .မမ အတွက်ဆိုရင်..အော်ကြီး က လုပ်ပေး၇မှာပေါ့ . .” ဖြူသီခိုင် မီးဖိုထဲက ပြန်ထွက်သွားချိန် သူ့ကောင်လေး စောကျော် သည် အော်ကြီး ကို ဘုကြည့်ကြည့်သွားသည် . .။ ဆိုင်သိမ်းချိန်မှာ ပုဂံဆေးသော ..အကူအလုပ်သမားနှစ်ယောက် ပြန်သွားကြလို့ သက်ထား နဲ့ အော်ကြီး ဘဲ ဆိုင်ထဲမှာ ရှိနေ သည် . .။ အော်ကြီး လဲ ဆိုင် အတွင်းဘက် မှာ ရှိနေတဲ့ ရေချိုးခန်းလေး မှာ ရေချိုး သည် . .။ ရေချိုးပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ဆိုင်ရှေ့ မှာ ရှိနေတဲ့ သက်ထား ကို လှမ်းခေါ်သည် ..။ ပြစရာရှိလို့ ဆိုပြီး ခေါ် သည် . .။ သက်ထား ရောက်လာ သည် . .။ စတိုခန်းထဲ ကို ခေါ်သွား သည် . .။
“ ဘာပြမှာလဲ အော်ကြီး…” အော်ကြီး ပြလိုက်တဲ့ဟာက သူ့ပေါင်ကြား က မတ်မတ်တောင်နေသော လိင်တန်ကြီး ပါဘဲ . .။ “ အို…ကဲလိုက်တာ . .” “ သက်ထား ကို ကြည့်ကြည့်ပြီး တအား ထန်နေတာ ..လာပါ သက်ထားရယ် ..တချီလောက် ဆွဲလိုက် ရအောင် . .” “ဟွန်း ..သူက …ဒါဘဲ…” သက်ထား က မျက်စောင်းလေး ထိုး ပြီး အော်ကြီး လိင်တန် ကို လှမ်း စမ်းလိုက် သည် . .။ …… မေထိန် နဲ့ စံစံတို့ မန္တလေး ပြန်ရောက်ပြီး ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ ဆိုင်မှာ ကြော်တာလှော်တာ..ချက်တာပြုတ် တာတွေ သင်နေ သည် . .။ စံစံ က မေထိန့်ကို သူ နယူးရောက် ကို အရင် ပြန်နှင့်မည် လို့ ပြော သည် . .။မေထိန်က လဲ ဆိုင်ပြန်ဖွင့်နေပြီ လို့ သက်ထား ဖုံးဆက် လို့ စံစံ ပြန်ချင်ရင်လဲ သက်ထား..အော်ကြီးတို့ အတွက် အကူရ..အဖေါ်ရတာဘဲ ဆိုပြီး သဘောတူ သည် ..။ စံစံ က ကျော်စွာထွန်း နဲ့ ဘယ်လိုလဲ..လို့ မေးတော့ မေထိန် က ရယ်မောလျက် ..ဒို့၂ယောက် က အလုပ်ချင်းလဲ တူနေတယ်လေ ..သူ လဲ နယူးရောက် လိုက်လာပြီး ဆိုင် ဖွင့်နိုင်တယ် မဟုတ်လား ..လို့ ပြော သည် ..။ စံစံကတော့ မေထိန် နဲ့ ကျော်စွာထွန်း လိုက်ဖက်ကြောင်း ပြောလေ သည် . .။
မေထိန် နဲ့ စံစံတို့လဲ ဟိုတယ်လ်မှာ မနေကြတော့ဘဲ ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ အိမ်မှာဘဲ နေကြ သည် ..။ ကျော်စွာထွန်း ၏ ဆိုင်မှ အလုပ်သမားများ ကလဲ မေထိန် နဲ့ စံစံတို့ကို ချက်ပြုတ်နည်းတွေအိတ်သွန်ဖါမှောက် ဆရာစား မချန်ဘဲ သင်ပေးကြ သည် . .။ ကျော်စွာထွန်း ကလဲ သူတတ်တာတွေ သိတာတွေ အားလုံး ပြောပြ သင်ပေး သည် . .။ စံစံ လဲ ပြန်ဖို့ လုပ်နေပြီ . .။ မနက်ဖန်ဆိုရင် ..၇န်ကုန် ကို သွားမည် . .။ ရန်ကုန်မှနေပြီး ပြန်မှာ ဖြစ် သည် ..။ စံစံ လဲ သက်ထားအတွက်..အော်ကြီး အတွက် ..လက်ဆောင်များ ၀ယ် သည် . .။ ပစ္စည်းတွေ သူ့သေတ္တာထဲ သေသေချာချာ စနစ်တကျ ထည့်နေခိုက်..မေထိန့် အခန်းဘက် က အသံတချို့ သဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရ သည် ..။ ဘာသံတွေလဲ . .။
စံစံ လဲ သေသေချာချာ နားထောင်ကြည့် သည် ..။ အို ..လိင်ဆက်ဆံ တဲ့ ခြင်ထောင်သံလို့ ခေါ်ကြတဲ့ ညည်းတဲ့ အသံတွေ ပါလား ..။ မေထိန် နဲ့ ကျော်စွာထွန်း ထင်ပါရဲ့ . .။ စံစံလဲ နံရံနားကပ်ပြီး နားထောင်ကြည့်လိုက် သည် . .။ မေထိန် ရေမိုးချိုးပြီး အ၀တ်အစားလဲပြီးချိန် အခန်းတံခါး လာခေါက်လို့ ဖွင့်လိုက်တော့ ကျော်စွာထွန်း ဖြစ်နေ သည် ..။ ကျော်စွာထွန်း က ..“ မေ့အတွက် မှာထားတာတွေ ရလို့ လာပေးတာ ..” လို့ ပြော ပြီး လက်လေးလုံးခန့် ဘူးအနီလေးတွေ ကို မေထိန့် လက်ထဲကို ထည့် သည် . .။ မေထိန် ဖွင့်ကြည့်သောအခါ ..ပတ္တမြား လက်ကောက် ..မြလက်ကောက် ..ရွှေလက်ကောက်များ နဲ့ ရွှေဆွဲကြိုးများ ဖြစ်နေ သည် . .။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ရက်ခန့် က ကျော်စွာထွန်း ကို မေထိန် အဖြေပေးခဲ့ သည် . .။ ချစ်တယ် ဆိုတာ .။ ကျော်စွာထွန် သည် အလွန်ပျော်သွား သည် ..။ မေထိန့်ကို အမြန်ဆုံး လက်ထပ်မည် ဆိုပြီး သူ့မိဘတွေ ကို ပြောပြ သည် . .။
ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ အမေ က လက်ဝတ်လက်စားများ..မေထိန့်အတွက် မှာတော့တာဘဲ …။မေထိန် က ယူအက်စ် မှာ ဒီလို ပုံစံတွေ ခေတ်မစားလို့ မလိုချင်ဘူး ပြောလဲ မရ ..။ “မေ..မောင်တို့ အမြန်ဆုံး လက်ထပ်ကြရအောင်ကွာ . .” ကျော်စွာထွန်း က မေထိန့်ခါးလေး ကို ဆွဲဖက်ပြီး ပါးမို့မို့လေးတွေကို ရွှတ်ကနဲ ရွှတ်ကနဲ နမ်း ရင်း ပြောလိုက် သည် ..။ မေထိန် လဲ သူ့ကို ပြန်ဖက်ထားလိုက် သည် ..။ နှစ်ယောက်သား ကိုယ်ချင်း ပူး ကပ်နေချိန်မှာ သူမ ရဲ့ ပေါင်တန်တွေ ကို မာမာကြီး တခု လာရောက်ထိကပ်တာကို မေထိန် သတိထား ကြည့်မိလိုက်တော့..ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ ပေါင်ကြား က မာမာအချောင်းကြီးတခု ထောင်ထနေတာ တွေ့လိုက် ရလေ သည် . .။
“ မောင် ..သူများတွေ ၀င်လာလို့ တွေ့သွားရင် မကောင်းဘူးကွယ် …နောက်မှ…” “ အို…ချစ်တယ်ကွာ..ကိုယ်တို့ က မကြာခင် လက်ထပ်ကြတော့မှာဘဲ မေရယ် ..ဘယ်သူမှလဲ မ လာပါဘူး…” “ ဟိုဘက်ခန်းမှာ စံစံ ရှိနေတယ်..မောင်ရယ် ..မကဲနဲ့..ရှက်စရာကြီး . . .” “ မကြားနိုင်ပါဘူး..အခန်းတွေ က လုံပါတယ် . .” ကျော်စွာထွန်း ကြမ်းပြီ ..။ မေထိန့်ကို သူမ ကုတင်ကြီးပေါ်ဆွဲလှဲလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်း အိအိတွေ ကို ဖိကပ် စုတ်နမ်းလေ သည် . .။ မေထိန်လဲ ချစ်သူ အလိုကျ ပြန်လည် စုတ်နမ်း လေ သည် ..။ အနမ်းတွေက စစ ချင်း သိမ်မွေ့သလောက် တဖြေးဖြေး နဲ့ ကြမ်းတမ်းလာ သည် . .။ ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ လက်တွေ က သွက်လှ သည် ..။ မေထိန့် အ၀တ်အစားတွေ ကို တခုပြီး တခု ချွတ်ခွာပစ်နေ သည် ..။ မေထိန် အပေါ်ပိုင်း အရင်ဆုံး ဗလာကျင်းသွား သည် ..။
လှပလွန်းသော ရင်သားစိုင် တောင်ပုစာ နှစ်လုံး သည် တင်းမာကော့ထောင်နေ သည် . .။ နို့သီးလေးများ က အသားဖြူလွန်းတာကြောင့် ပန်းနုရောင်လေးတွေ ဆိုတာ တွေ့ရ သည် ..။ ကျော်စွာထွန်း ..နမ်းပြီ..။ မေထိန့် ရင်စိုင်တွေ ကို နမ်း သည် ..။ မေထိန် လဲ မျက်လုံးလေးတွေ မှိတ်ကျသွား သည် ..။ သူ့အနမ်းတွေ က ရင်ခုံစရာကြီး ..။ အို..သူ …သူ…မေထိန့် ရင်သားထိပ်ဖူး..နို့ သီးလေးတဖက် ကို ငုံလိုက် ပြီ ..။ဟာ…အို …..သူ…သူ….သူစို့နေတယ် ..အင်ဟင် …..အာ……အို…..။ မေထိန် ခါးလေး ကော့တက်လာတုံး..ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ သွက်သော လက်တဖက် က မေထိန့် ခါး က ထမိန်စ ကို ဖြေထုတ်လိုက် သည် ..။ နို့တွေကို တဖက်ပြီး တဖက် အစို့ခံနေရတာမို့ မေထိန် မိန်းမူး နေတုံးမို့ ထမိန် ကျွတ်လို့ ကျွတ်မှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး . .။ ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ လက်တဖက် က မေထိန့် ပေါင်ကြား ကို ရောက်လာ သည် ..။ ပင်တီပါးလေး အပေါ် ကနေ စမ်း ပွတ်နေ သည် ..။
ကိုင်နေ သည် ..။ ပင်တီလေး ရဲ့ ဂွဆုံနေရာ ဖေါင်းဖေါင်းကြီး မှာ အရေ တွေ စိုနေတာ သူ စမ်းမိ သည် ..။ မေထိန် လဲ စိတ်တွေ ထကြွနေပြီ ဆိုတာ သူ သဘောပေါက် သွား ပြီး အကွဲကြောင်းနေရာကို သူ ပွတ်သပ်နေ ပြီ …။ “ တော်..တော်ပြီ..မောင်ရယ်..လွန်ကုန်ကြတော့မယ် …နောက်မှကွာ…နောက်မှ…” မေထိန် က ဆက် မလုပ်ချင်တော့ဘဲ..ငြင်းဆန် လာပေမဲ့ ကျော်စွာထွန်း က အရမ်း စိတ်တွေ ထကြွ နေပြီ ..။ မေထိန့် ပြောစကား ကို နားမထောင်တော့ ..။ ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ပြီ ..။ ပင်တီလေး ကို ဆွဲချွတ် သည် ..။ မေထိန် လဲ ချစ်သူ ကို မတားချင်တော့ ..။ မကြာခင် လဲ လက်ထပ်ဖို့ စီစဉ်နေကြ ပြီ လေ…။ ပေါင်တန်ဖြူဖြူတွေ ကြားက မေထိန်ရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီး ကို ဘွားကနဲတွေ့လိုက်ရသောကျော်စွာထွန်း သည် အငမ်းမရ ဘဲ ပေါင်ကြားကို ခေါင်းအပ်ပြီး ..အင်္ဂါစပ်ကြီး ကို နမ်းလေပြီ . .။
“အို….မောင် …ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ …” ကျော်စွာထွန်း ဘာမှမကြားတော့..။ နားမထောင်တော့ ..။ မေထိန့် အင်္ဂါစပ်ကြီး ကို တပြတ်ပြတ် နဲ့ ယက်ပြီ ..။ ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ လျာအပြားလိုက်ကြီး ယက်နေတာကို ထိမိလွန်းအားကြီးလို့ ရမ်းခါနေတဲ့ မေထိန့် တင်ပါးကြီးတွေ ကို ကျော်စွာထွန်း က သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ထိန်းချုပ်ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး အင်္ဂါစပ်အကွဲကြောင်းထဲကို ဖိဖိ ယက်ပေးနေပေ သည် . .။ “ အား..ဟင့်ဟင့်ဟင့်…မောင် . ..အိုး…..မောင် . . .သိပ်ကဲတာဘဲကွာ….အို့……အို့……..” တဖက်ခန်းမှ စံစံ သည် တပြတ်ပြတ်အသံတွေ နဲ့ မေထိန် ရဲ့ ညည်းသံတွေကြောင့် သူတို့ ဘာတွေ ဖြစ်နေကြပြီလဲ ဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ပေမဲ့ မမြင်မတွေ့၇တာကြောင့် အလွန်ဘဲ မြင်တွေ့ချင်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်နေပြီ . .။ သို့ပေမဲ့ ကျော်စွာထွန်းတို့ အခန်းများ ရဲ့ နံရံတွေမှာ ဘာ အပေါက်မှ မရှိနေတာမို့ စံစံ့ အတွက် ချောင်းဖို့ အပေါက် မတွေ့ဘူး ..။
စံစံမှာ နံရံမှာ နားကပ်ပြီး အသံတွေကို နားထောင်နေရုံကလွဲပြီး ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေ သည်။ စံစံရဲ့ လက်တွေက သူမ ထမိန် ကို ဖြေလျော့ပြီး ..ပေါင်ကြား က ဖူးကြွဖေါင်းတင်းနေသော အရေတွေ စိုရွှဲနေတဲ့ သူမ အင်္ဂါစပ် ကို ဖိကာဖိကာ ပွတ်သပ်နေရ သည် ..။ မေထိန် သည် ကာမစိတ်တွေ ထကြွလွန်းလို့ တုန်ရီကာ တဆတ်ဆတ် နဲ့ တပြတ်ပြတ် ယက်နေသော ကျော်စွာထွန်းရဲ့ ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဆွဲကိုင်ထားမိ သည် ..။ ထိမိလွန်း..ကောင်းလွန်းလို့ သူမ မျက်လုံးတွေမှ မျက်ရေများပင် စီးကျလာရ သည် ..။ ရုတ်တရက် ယက် ပေးတာများ ရပ်ဆိုင်းသွားလို့ မေထိန် ဖျတ်ကနဲ မျက်စိဖွင့်ကြည့် သည် ..။ အို …သူ ….သူ ..သူ့အ၀တ်တွေကို ချွတ်နေတာကိုး ..။ ဟယ်တော့ …။ နဲနဲနောနော ဟာကြီး မှ မဟုတ်တာ ..။
မေထိန် ထိတ်ကနဲ ရင်ထဲက ကျိတ်ဝမ်းသာသွား သည် ..။ သက်ထား သည် လိင်တန် သေးငယ်သော ယောင်္ကျားတွေ ကို အထင်သေး တတ် သည် ..။ မေထိန် ယူမဲ့ယောင်္ကျား က လိင်တန် မသေးဘဲ စံ ချိန်မှီကြီး နဲ့ ဆိုတာ သက်ထား ကို ကြွားနိုင်သွားပြီ လေ ..။ ကျော်စွာထွန်း သည် မေထိန့် ရင်သားစိုင်တွေကို တဖက်ပြီးတဖက် စို့ရင်း မေထိန့်ပေါင်တန်တွေ ကိုသူ့ဒူးတွေနဲ့ တဖက်တချက်ကို တွန်း သည် ..။သူ့လိင်တန်နွေးနွေးကြီး က မေထိန့် အင်္ဂါစပ် ကို လာထိ တော့ ကြက်သီးတွေ ဖြန်းကနဲ ထသွားရ သည် ..။ မေထိန် သည် သက်ထား ၀ယ်ပေးသော ရာဘာ လိင်တန်တု နဲ့ အာသာဖြေဖျောက်ခဲ့ဘူးပေမဲ့ ယောင်္ကျားတယောက် ရဲ့ လိင်တန်စစ်စစ် နဲ့ တခါမှ မကြုံဘူးသေးတာကြောင့် အလွန်ဘဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေပေ သည် ..။ ကျော်စွာထွန်း သည် သိပ် အချိန်ဆွဲနေတတ်သူ မဟုတ် ..။သူ့လိင်တန် ကို မေထိန့် အင်္ဂါစပ် အပေါက်မှာတေ့ကာ ထိုးသွင်းလေ သည် . .။
အို…အို့…….မောင် …. မောင့်ဟာကြီး က သိပ်ကြီးး တာဘဲ ….” တဖက်ခန်းမှ နားစိုက်ထောင်နေသော စံစံ သည် မေထိန့် အသံ ကို ပြတ်ပြတ်သားသားကြီးကြားလိုက်ရ သည် . .။ မမြင်နိုင်တဲ့ အတွက် အသံဘဲ နားထောင်ပြီး..သူမ ဖါသာ ပွတ်နေ သည် …။ ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ လိင်တန်ကြီး သည် စိုစိုရွှဲနေသော မေထိန် ရဲ့ အင်္ဂါစပ်ထဲ မဆန့်မပြဲကြီး အတင်းကြီး တိုးဝင်နေသည် ..။ “အား….အား….မောင်..မောင် . .မေ့အဖုတ်လေး ကွဲသွားလိမ့်မယ် …ဖြေးဖြေး…..” ကျော်စွာထွန်း သည် မိန်းမ မရဘူးသေးပေမဲ့..မိန်းမ အတွေ့အကြုံများနေပြီ ဖြစ်တဲ့ လူပျိုသိုးကြီး ဖြစ်သည် ..။
မေထိန်လဲ သူထိုးထိုးသွင်းလိုက်တိုင်း..တကိုယ်လုံး က အကြောပေါင်းတထောင် အီဆိမ့်သွားရသလို အရသာကောင်းလွန်းနေ သည် ..။ အော်..ဒါကြောင့်လဲ မိန်းမတွေ လီးဆိုတဲ့ ယောင်္ကျား လိင်တန် ကို ကြိုက်ကြတာကိုး ..လို့ စိတ်ထဲ ကျိတ်ခါ မှတ်ချက်ချမိလိုက်လေ သည် . .။ ကျော်စွာထွန်း လဲ ဖြေးဖြေးချင်း တထစ်သွင်း..နှစ်ထစ်သွင်း နဲ့ အားလုံးသွင်းမိသွားပြီ ..။ လိင်တန် အဆုံးအထိ သွင်းမိနေပြီး နဲနဲလေးဘဲ ပြန်ပြန် ဆုတ်ပြီးကပ်ထိုးနေသည် ..။ မေထိန် လဲ မူးမေ့မတတ် အရသာထူး နေပြီး ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ ခါးကို ဆွဲဖက်ထား ပြီး..ကျော်စွာထွန်း ထိုးသွင်းတိုင်း..အင့်အင့် နဲ့ အသံထွက် သည် ..။ တဖက်ခန်းမှ စံစံလဲ ပွတ်တာတွေ မြန်လာ သည် . .။ စိတ်ကူး နဲ့ဘဲ မှန်းဆကာ အာသာဖြေနေမိ သည် ..။ ကျော်စွာထွန်း လဲ မေထိန် ခံနိုင်လာတာကို တွေ့တာကြောင့်..“မောင် ..နဲနဲ မြန်မယ်နော် ..”လို့ ခွင့်တောင်းသလို ပြောလိုက်ရာ မေထိန် လဲ ခေါင်းဆတ်ပြပြီး အင်းအင်း လို့ သဘောတူတာနဲ့ ကျော်စွာထွန်း လဲ ခပ်မြန်မြန်လေး ဆောင့်ထည့်လာ သည် ..။
မသိမသာ လဲ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းလာ သည် ..။ မေထိန့် ပေါင်ကြား နေရာတွေကို တဖတ်ဖတ် နဲ့ ရိုက်ခတ်တဲ့ အသံတွေ ကြားလာရ သည် ..။ မေထိန့် ကို အားနဲ့ ဆောင်ကလိုက်တိုင်း မေထိန့် ရင်သားစိုင်တွေ က တုန်ခါနေသည် ..။ ကျော်စွာထွန်း လဲ ရင်သားထိပ်သီး တွေကို တဖက်ပြီး တဖက် စို့ပေးရင်း ..ဆောင့်တာတွေ ပိုမို မြန်သထက် မြန်လာ သည် . .။ မေထိန်လဲ သူမတင်ပါးတွေကို ကော့ကော့ ပေးနေ သည် ..။ မေထိန့် ညည်းသံတွေ ..ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ တရှူးရှူး တအင်းအင်း အားယူသံတွေ..အသက်ရှူသံတွေ ..နဲ့ တဖေါက်ဖေါက်..တဖတ်ဖတ် အသံတွေ ဆူညံနေ သည် ..။ မေထိန်မှာ ကောင်းလွန်းလာပြီး ကျော်စွာထွန်း ဆောင့်နေတာကိုတောင် နှေးတယ် ထင်လာ သည် ..။ ကျော်စွာထွန်း ရဲ့ တင်ပါးတွေကို ဆွဲဆွဲ ကပ်ပြီး…ဆောင့်စေလာ သည် ..။
ကျော်စွာထွန်း လဲ မေထိန် အရမ်း ကောင်းလာပြီဆိုတာသဘောပေါက်ပြီး အသားကုန် ဆောင့်လေတော့ရာ မကြာခင်မှာဘဲ မေထိန် သည် အို…အို…အာ…အာ နဲ့ အော်ရင်း ..ကာမအထွပ်အထိတ် ကို တက်လှမ်း သွားရတော့ ကျော်စွာထွန်း လဲ ပြီးချင်နေ ခဲ့ပေမဲ့ မေထိန်ကောင်းအောင် ထိန်းပြီး လုပ်ပေးနေတာမို့ မေထိန် လဲ ပြီးသွားရော..သုတ်များကို တဖျောဖျော နဲ့ ပန်းထုတ်လိုက်ပြီး ..ကာမလမ်းဆုံး ကို တက်လှမ်းလိုက်ပါတော့ သည် . .။ စံစံမှာလဲ ပေါင်ကြားက အင်္ဂါစပ်မှာ လက်လေးအုပ်ရင်း ခွေခွေလေး ဖြစ်နေ သည် ..။ သဘာဝသွေးသားဆန္ဒတွေ ပြင်းပြနေရတာကြောင့် မိမိ သည် ယောင်္ကျားတယောက် ရဲ့ စပ်ရှက်ပေးခြင်း ကို အမှန်တကယ် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း..သဘောပေါက်လိုက်မိ သည် . .။ ဖြူသီခိုင် သည် ကားမောင်းနေသော စောကျော် ကို ကြည့်လိုက်တော့ စောကျော် သည် မျက်နှာ ပုတ်သိုးနေ သည် ..။ ဖြူသီခိုင် သိလိုက် သည် ..။ သက်ထားတို့ ဆိုင်မှာတုံးက သူမ ထမင်းချက် အော်ကြီး ကို အရောတ၀င် စကားပြောတာကို စောကျော် မကျေနပ်တာ ဖြစ်မည် ..။ “စောကျော် ..မင်း ဘာဖြစ်နေလဲ …” စောကျော် မဖြေ ..။
“ မမ ကို စိတ်ကောက်နေတာလား …” “ မကောက်ပါဘူး …” “ မင်း ..မနာလို မဖြစ်နဲ့လေ ..မမ သတိထားမိနေတာကြာပြီ ..မင်း က မမ တခြားယောင်္ကျား တယောက်ယောက် နဲ့ စကားပြောရင်..စိတ်တွေ ဆိုးနေတယ် ..အဲဒါ မကောင်းဘူး..သိလား …” စောကျော် ဘာမှ ပြန်မဖြေ ..။ “ မမ က အရာရာ ကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့ လုပ်နေတယ် လို့ မင်း ထင်လား …” စောကျော် ကားကိုဘဲ မောင်းနေ သည် ..။ ဘာမှ မပြော ..။ “မမ တို့ ဆူရှီလုပ်ငန်းတွေ က စားသင့်သလောက် လဲ စားလိုက်ရပြီးပြီ ..ဆိုင်လေးတွေ လဲ ပွစိကျဲနေအောင်ကိုဘဲ ဖွင့်ပြီးနေပြီ ..တက်တဲ့ အပိုင်းက တက်ပြီးပြီ ..ကျတဲ့အပိုင်း လာနိုင်တယ် ..ဒီတော့ မမ လဲ လိုင်းတခု ထပ်ဖွင့်မလို့ ..ကြံနေတာ …ထမင်းဆိုင် ကောင်းကောင်းတခု ဖွင့်နိုင်ဖို့က ထမင်းချက် ကောင်း တယောက် ရဖို့ လိုတယ် ..ဟင်းဟင်း ..ဒါဆို မင်း သဘောပေါက်ကွာ..ဘာကြောင့် မမ ..အော်ကြီး ကို ခင်ခင်မင်မင် ပေါင်းနေလဲ ဆိုတာ . . ” စောကျော် ဘာမှ ပြန်မပြော ..။ ဖြူသီခိုင် က စောကျော် ရဲ့ ပေါင်ကို သူမ လက်နဲ့ ပွတ်နေ သည် ..။
သူတို့ အိမ် ကိုလဲ ပြန်ရောက်ရော ..ဖြူသီခိုင် က အရင် အိမ်တံခါးကို သော့ဖွင့်ကာ ၀င် သည် ..။ စောကျော် က အနောက်က ၀င်လိုက် သည် ..။အိမ်ထဲလဲ ရောက်ရော စောကျော် သည် ဖြူသီခိုင် ကို ခပ်ကြမ်ကြမ်း ဆွဲဖက်ခါ သူမ နှုတ်ခမ်းဖေါင်းဖေါင်းတွေကို အငမ်းမရဘဲ စုတ်နမ်းလေ သည် …။ ဖြူသီခိုင် ကလဲ အငမ်းမရဘဲ ပြန်လည် စုတ်နမ်း သည် . .။ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီး အနီးမှာဘဲ သူတို့ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်စားတွေကို အမြန် ချွတ်ပစ်နေကြ သည် . .။ စောကျော် ရဲ့ ဘောင်းဘီများ ကျွတ်သွားတာနဲ့ ဖြူသီခိုင် သည် ကြမ်းပေါ်မှာ ဒူးလေး ထောက်ချလိုက်ပြီး မတ်မတ်ကြီး ထောင်နေတဲ့ ညိုမဲမဲ လိင်တန်ကြီး ကို ငုံကာ စုတ်လေ သည် ..။
သက်ထား သည် ငွေရှင်းပြီးလို့ ပြန်ဖို့ တံခါးပေါက်ကို လျောက်သွားနေသော စားနေကျဖေါက်သည် တွေကို အပြုံးလေး နဲ့..Thank you so much ..Haveanice day !! လို့ နုတ်ဆက်နေတုံး..သူမ ရှေ့ စားပွဲပေါ်က ဖုန်း မြည်လာသည် ..။ အော်ကြီး သည် သူတို့ ဆိုင်အနားက ရုံးကြီးတရုံး က အစည်းအဝေး လုပ်လို့ သူတို့ဆိုင်ကို နေ့လည်စာ ထမင်းဘူးများ အော်ဒါ လုပ်တာကြောင့်..အလုပ်များနေ သည် . .။ စံစံတို့မြန်မာပြည်သွားနေခိုက်..သူတယောက်ထဲ ဖြစ်နေလို့သူ့အသိ မြန်မာ့ တယောက် ကို လာကူပေးဖို့ ခေါ်ထားရ သည် ။ သက်ထား မီးဖိုခန်း အပေါက်ဝ ကို လာပြီး ..၀မ်းသာအားရ…“အော်အော အော်ကြီး အောအော်ကြီး ..စံစံ ပြန်လာပြီ..တဲ့…” လို့ အော်ပြောလေ သည် ..။
အော်ကြီး ကို ကူနေသော ဘယ်ကျော် လဲ သဘောကျ သွား သည် ..။ သူက ဆူရှီဆိုင် လုပ်နေတာ ..အော်ကြီး ကို အားနာလို့ ဒီမှာ လာကူလုပ်ပေးနေတာ ဖြစ် သည် ..။ အော်ကြီး လဲ ကြော်ပြီးသား ခရုခေါက်ဆွဲကြော်တွေကို ဖေါ့ဘူး အဖြူလေးများထဲ ခွဲကာ ဖြည့်လောင်းထည့်ရင်း “ကောင်းတာပေါ့ ..ခုတလော မှာ ပိုပြီး အလုပ်များလာတယ် ..” လို့ ပြောလေ သည် ..။ စံစံ ပြန်ရောက်လာပြီ ..။ စံစံ သည် မြန်မာပြည် က အော်ကြီး အတွက် လက်ဆောင်တွေ အများကြီး ယူလာပေး သည် ..။ အော်ကြီး နဲ့ စံစံ မီးဖိုထဲ ပြန်ပြီး တွေ့ကြပြီ …။ အတူတူ ချက်ကြပြုတ်ကြ..ကြော်ကြ..လှော်ကြ ရပြန်ပြီ …။ စံစံ နဲ့ နီးကပ်လွန်းအားကြီးတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် ထိမိ သည် ..။ ကိုင်မိသည် ..။ ပွတ်မိ သည် ..။ စံစံ ထမိန် ၀တ်လေ့ရှိတာ များလို့ ထမိန်ပြင် ၀တ်တဲ့အခါ အတွင်း က အမြဲဖုံးကွယ်ထား တဲ့ မိုးခိုသားနေရာ တွေကို ဖျတ်ကနဲ လျစ်ကနဲ လဲ တွေ့ရတတ် သည် …။
စံစံ ရောက်တာနဲ့ သက်ထား လဲ ဆိုင်ပိတ်တာကို စံစံကို လွှဲအပ် လုပ်ခိုင်းပြီး သူမက စောစော ပြန်တတ် လာ သည် . .။ သက်ထား သည် သွေးသားဆန္ဒ အရ အော်ကြီး နဲ့ကာမ စပ်ရှက်ခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တမ်း အော်ကြီး ကို ရီးစားအဖြစ် ..ချစ်သူအဖြစ် လက်မခံနိုင်တာကြောင့် သူမကို သဘောကျတဲ့ ယောင်္ကျားများ နဲ့ ဒိတ်ထွက် ဖို့ လုပ်ရပြန် သည် . .။ စံစံ သည် ငါးဖယ်သုတ် ..လဘက်သုတ်တွေ သုတ်ရင် အော်ကြီး အတွက် ပိုသုတ်ပြီး ဖယ်ထား သည် ..။ အလုပ်ပါးသွားရင် လာပေး သည် ..။ အော်ကြီးကလဲ စံစံ ကြိုက်တတ်တဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးနဲ့ ၀က်သားစဉ်းကော..လိုဟာချက်ရင် စံစံ့အတွက် ဖယ်ထားပေးတတ် သည် ..။ တဦး မှာ စေတနာ..တဦးမှာ မေတ္တာ ဆိုသလို သူတို့ ရဲ့ တယောက် အပေါ်တယောက် ထားတဲ့သံယောဇဉ် က တစတစ နဲ့ ပို ကြီးမား လာနေ သည် ..။
သက်ထားက လဲ “ စံစံနော်..အော်ကြီး နဲ့ ဆိုင်ခွဲထွက်ပြီး ဖွင့်မသွားနဲ့အုံး …မေထိန်ကလဲ ပြန်မလာသေးဘူး..” လို့ စ လို့ စံစံ လဲ ..“ ကိုအော်ကြီး ကြားသွားအုံးမယ်..မမရယ် ..”လို့ ရှက်သလို ပုံ နဲ့ တား သည် ..။ စံစံ က ဆိုင်ပိတ်တာမို့ အော်ကြီး နဲ့ လုပ်စရာ အားလုံး လုပ် ..ဆေးကြော သန့်စင်ပြီး ..အတူတူ ပြန်ကြ သည် . .။ စံစံ သည် အော်ကြီး နဲ့ သည်လို နီးနီးစပ်စပ် ထိတွေ့နေရတာ ညဘက်ကြီး နှစ်ယောက်ထဲ အတူတူ ပြန်ရတာတွေကို စိတ်လှုပ်ရှား..ရင်ခုံ မိနေ သည် . .။ စံစံ က အခု သက်ထား နဲ့ မနေတော့ ..။ ဆိုင်နဲ့ သိပ် မဝေးတဲ့ တရုတ်တန်းထဲမှာ အခန်းငှားနေ သည် ..။ အော်ကြီး က ဆိုင်ပိတ်ပြီး ပြန်ကြရင် စံစံ့ကို တိုက်ခန်း အောက်အထိ လိုက်ပို့ပေး သည် ..။ ဒီနေ့လဲ စံစံ နဲ့ စကားတပြောပြောနဲ့ စံစံနေတဲ့ တရုတ်တန်း ကို လိုက်ပို့ဖို့ ကားလမ်းကျယ်ကြီး ကို ဖြတ်ချိန်မှာ ကားစုတ်ကြီးတစီးက သူတို့နှစ်ယောက် ဆီကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြေးလာနေလို့အော်ကြီး..စံစံ့ခါးလေးကနေဆွဲဖက်ပြီး အနောက်က ပလက်ဖေါင်းပေါ် ပြန်ဆုတ် သည် ..။
ကားကြီး က သူတို့ကို တိုက်ခါနီး ပွတ်ခါသီခါလေး ဖြတ်သွားပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ကျွီကနဲ ထိုးရပ် သည် ..။ ရပ်ရပ်ချင်းဘဲ ကားထဲက လူနှစ်ယောက် ထွက်လာ သည် ..။ လူမဲ ကပ္ပလီ နှစ်ယောက် ..။ သူတို့ လက်ထဲမှာ သေနတ် ကိုယ်စီ နဲ့ ..။ “ မာသာဖတ်ကာ ..မပြေးနဲ့..ငါတို့ ပစ်လိုက်မယ် …” လူမဲတွေ က လှမ်းအော် သည် ..။ “စံစံ..ပြေး..ပြေး ..” “ ကိုအော်ကြီး လဲ လာ..” စံစံ က သူ့လက်ကို ဆွဲကာ နောက်လှည့်ပြေး သည် . .။ လူမဲနှစ်ယောက် အနောက်ကနေ ပြေးလိုက် သည် ။ ထိုအခိုက်မှာ..ကားတစီး အပြင်းမောင်းလာတာတွေ့ရ သည် ..။ အော်ကြီး နဲ့ စံစံ နဲ့ လူမဲတွေ ကြားထဲ ကို ၀င်ရပ်လိုက်တော့ လူမဲတွေ အနောက် ပြန်ဆုတ်သွား သည် ..။ ကားထဲက လူနှစ်ယောက် ၀ုန်းကနဲ ခုန်ထွက်လာ သည် ..။ “ပိုလီ့စ် …လက်နက်တွေ ချလိုက် …” “ ဟာ ..နာတာရှား …” ကားထဲက ဆင်းလာတဲ့ နှစ်ယောက်ထဲက တယောက် သည် ရဲစုံထောက်မ နာတာရှား ဖြစ်နေ သည် ..။
နာတာ ရှား နဲ့ သူမအဖေါ် သည် လူမဲများ ကို သေနတ်တွေ နဲ့ ချိန်ကာ လက်နက်ချဖို့ အော်သည် ..။ လူမဲများ သူတို့ ဘက်ကို သေနတ်နဲ့ ပစ် သည် ..။ ပစ်ပြီး ထွက်ပြေး သည် ..။ နာတာရှာတို့ က မပစ် ..။ လူမဲတွေ အမှောင်ထုထဲ ပျောက်ကွယ်သွား သည် . .။ အော်ကြီး နဲ့ စံစံလဲ ကားကြီးတစီး အနောက်မှာ ၀ပ်နေကြ သည် ..။ နာတာရှား နဲ့ သူ့အဖေါ် ..အော်ကြီး နဲ့ စံစံတို့ ဆီကို လျောက်လာ သည် ..။ “ အော် …မင်းကို ငါ လာ သတိပေးမလို့ဘဲ ..ဒီကောင်တွေ ..မင်းကို လာရန်ရှာမယ် ဆိုတာ ..ငါ စိတ်ထဲ ထင် နေတာ …” “ သူတို့ က ဘယ်သူတွေလဲ ..ဘာကြောင့်..ငါ့ကို ရန်ရှာချင်ကြတာလဲ ..” “ ဒီကောင်တွေ က မင်းရိုက်သတ်လိုက်လို့ သေသွားတဲ့ မုဒိန်းကောင် ရဲ့ ညီ ဒေမင်ဟုမ်းစ် ရဲ့ လူတွေ လို့ ယူဆရတယ် . .ရွန်ဟုမ်းစ် အတွက် မင်းကို လက်စားခြေချင်နေကြတယ် လို့ ဒို့ သတင်းရထားတယ် ..ဒါကြောင့်လဲ ..ညဘက် မင်းတို့ အိမ်အပြန် မှာ တခုခု ဖြစ်မှာစိုးပြီး..ငါ နဲ့ ငါ့ ပါတနာ လာလာစောင့်နေတာ ..” “ဟား..ဒါဆို ကိုအော်ကြီး အတွက် မလွယ်ဘူး..ဒီမြို့မှာ နေဖို့ မကောင်းတော့ဘူး ထင်တယ် . ..” စံစံ လဲ သူမ ရှေ့မှာဖြစ်ပျက်သွားလို့ အရမ်းကြောက်နေ သည် ..။ နာတာရှား က အော်ကြီး နဲ့ စံစံ့ကို အိမ်အထိ လိုက်ပို့ပေး သည် . .။ နောက်တနေ့ မှာ အော်ကြီး အိမ်ပြောင်း သည် ..။ ကိုကျင်စွမ် အိမ်မှာ မနေတော့ ..။
သူ့ကို သတ်ချင်နေသော လူမဲများ ရှိနေပြီမို့ သူ့ကြောင့် ကိုကျင်စွမ်ကို မထိခိုက်စေချင် ..။ ဆိုင် နဲ့ မနီးမဝေး မှာ နာတာရှား ရှာပေးတဲ့ အခန်း မှာ ပြောင်းနေလိုက် သည် ..။ စံစံ က ဆိုင်မှာ မီးဖိုထဲ..အတူတူ ချက်ပြုတ်နေရင်း ..“ ကိုအော်ကြီး..တခြား ပြည်နယ်တခုခု ကို ပြောင်း သွားသင့်နေပြီ ..ဒီမှာ မနေသင့်တော့ဘူး . .” လို့ အော်ကြီး ကို ပြော သည် ..။ အော်ကြီး သတင်း ကို ကြား လို့ ဘယ်ကျော် ရောက်လာ သည် ..။ “ ကိုအော်ကြီး ..ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ တခုခုတော့ ဆောင်သင့်နေပြီ . . .” အော်ကြီး လဲ နာတာရှား သူ့ကို နယူးေ၇ာက် မှာ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့် မရှိဘူး ဆိုတာ ပြောပြထားတာကို ဘယ်ကျော်ကို ပြောပြ သည် ..။ ဘယ်ကျော် က ကိုအော်ကြီးကလဲ ..ကိုင်ဆောင်ခွင့် မရှိတာနဲ့ ကိုယ့်ကို လာသတ်တာ ကို လည်စင်းပေး၇မှာလား ..ခုခံပိုင်ခွင့် ..ဆဲလ်ဖ်ဒီဖင့်စ် ကတော့ လုပ်ရမှာပေါ့ .. လို့ ပြောလေ သည် .။ “ မင်း ဆိုလိုချင်တာက လက်နက်ပုံး ၀ယ်ရမယ် ပေါ့ …” “ ကျနော် ကတော့ တခုခု ဆောင်ထားစေချင်တာဘဲ . ” နာတာရှား ကို မေးကြည့်တော့ ..သူတခုခု စီစဉ်ပေးမည် လို့ ပြော သည် ..။ သက်ထား လဲ အော်ကြီး အတွက် စိတ်ပူ သည် .. ။
နာတာရှား ကတော့ သူနဲ့ သူ့အဖွဲ့က သတိထား စောင့်ကြည့်သလို အော်ကြီး ကို ဟိုတနေ့က လာရန်ရှာသူတွေကိုလဲ စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်နေသည် လို့ ပြောသည် ။ ဒီနေ့ ညလဲ အော်ကြီး နဲ့ စံစံ ဆိုင်ပိတ်ရ သည် . .။ သက်ထား က ချိန်းထားတာတခု ရှိလို့ ညအထိ မနေ ..။ စံစံ လဲ သက်ထား မရှိချိန် အေ၇ှ့မှာ တာဝန်ယူရ သည် . .။ ဆိုငပိတ်ခါနီး စံစံ မီးဖိုထဲ ပြေးဝင်လာ သည် . ။ “ကိုအော်ကြီး . ..လူမဲတယောက် လာစားအပြီး ပြန်အထွက် ဂျာကင်လျစ်ပြီး သေနတ်ပြသွားတယ် ..” “ဟေ…ဘယ်မှာလဲ ..” အော်ကြီးတော်တော် လန့်သွား သည် . .။ဆိုင်ထဲတောင် လိုက်လာနေကြပြီ ..။ နာတာရှား ကို ဖုန်းဆက် ပြောပြ သည် ..။ အလုပ်သမား နှစ်ယောက် ပြန်သွားအပြီး ..စံစံက ဆိုင်ရှေ့က “ အိုးပင်း ” လို့ နီယွန်မီး အနီရောင် စာလုံး ကို ခလုပ်ပိတ် လိုက်ပြီး ဆိုင် အ၀င်တံခါးကြီး ကိုလဲ အတွင်းက သော့ပိတ်လိုက် သည် . .။
အော်ကြီး က မီးဖိုခန်း ထဲ ကို သေသေချာချာ ရှင်းလင်း နေ သည် ..။ ပိတ်ချိန်မှာ အားလုံး ပြောင်လက်နေအောင် တိုက်ချွတ်ထားရတော့ အချိန်ပေးပြီး လုပ်ရ သည် ..။ ဆိုင် အရှေ့က မီးတွေ လဲ ပိတ်လိုက်လို့ မီးဖိုထဲက မီး ဘဲ လင်းနေ သည် ..။ စံစံလဲ ခါတိုင်းလိုဘဲ ..တနေ့လုံး ရောင်းရငွေတွေ ရေတွက် ပြီး မီးခံသေတ္တာထဲ ထည့် သည် ။ မီးဖိုထဲ က ဘာသံမှ မကြားတော့လို့ ကိုအော်ကြီး ဘယ်ရောက်သွားသလဲ ဆိုပြီး….“ကိုအော်ကြီး . ..” လို့ ခေါ် ကြည့် သည် ..။ ဘာမှ ပြန်မထူး . .။ အိုး…သူ..သူ…ဘယ်ရောက်သွားလဲ . . .။ မီးဖိုထဲ စံစံ လှမ်းဝင်လိုက်ရော..ဗြုံးကနဲ သူမကို အနောက်က လူတယောက် က လှမ်းဖက်လိုက်တာ ကြုံရ သည် ။ ဖက်သူရဲ့ လက်က စံစံ့ ရင်သားမို့မို့ တွေကို ဆုတ်ကိုင်မိနေ သည် ..။ အိုး … ဟာ….ကိုအော်ကြီး ဘဲ . ..။
“အိုး …လွှတ်ပါ ..ကိုအော်ကြီး……….ဘာ….ဘာ….လုပ်တာလဲ လို့ . .. ……..” “ မလွှတ်ဘူး . . .စံစံ . .စံစံ့ကို ဒို့ သိပ်ချစ်တယ် . . .” “အိုး…ချစ်တာ နဲ့ ဒီလို လုပ်ရသလား…လွှတ်…..လွှတ်………..” “ဟင့်အင်း . .လွှတ်ဘူး . . .” အော်ကြီး က အနောက်ကနေ သိမ်းဖက်ထားတာ ..။ စံစံ့ တင်ပါးအိအိတွေ ကို သူ့ မာကျောတဲ့ အတန်ကြီး က ဖိထောက်မိထား သည် ..။ သူ့လက်တွေကလဲ စံစံ့ ၇င်သားတွေ ကို ဆုတ်နယ်နေ သည် ..။ အော်ကြီး ရဲ့ နှခေါင်းချွန်ချွန်ကြီး က စံစံ့ လည်ပင်းတွေကို နမ်းနေ သည် ..။ စံစံ စိတ်တွေ တအားလှုပ်ရှားနေ သည် ..။ တကယ်ဆိုတော့ သူမ သည် အော်ကြီး ဘက်က စလာတာ ကို မျှော်လင့် နေတာပါ။ ဟန်ဆောင် အမူပိုကာ ရုန်းကန်နေရပေမဲ့ စံစံ စိတ်တွေ က တအား နိုးကြားဖေါက်ပြန်နေသည် ။
အော်ကြီး လဲ စံစံ့ကို စွေ့ကနဲ ပွေ့ချီလိုက် သည် ..။ “အို ..သူများကို ဘယ်ခေါ်သွားမလို့လဲ . ..” သက်ထား ကို သူ လုပ်နေကျ စတိုခန်းထဲ ကို စံစံ့ကို ခေါ်သွားတာ ဖြစ်သည် . .။ ဆန်အိတ်ပုံပေါ် စံစံ့ကို ချလိုက် သည် . .။ အော်ကြီး က အပေါ်က..စံစံက အောက် က ..။စံစံ့ နှုတ်ခမ်း ဖူးဖူး လေးကို ငုံခဲ စုတ်ယူနေရင်း ..စံစံ ထမိန်လေး ကို လှန်တင် သည် . .။ စံစံသည် မျက်လုံးများကို မှိတ်ထားလိုက် သည် ..။ သူ့လည်ပင်းကို ဆွဲကာ ဖက်ထားလိုက် သည် ..။ အော်ကြီး လက်ချောင်းတွေ က စံစံ့ ပေါင်ကြား ကို စမ်း နေ သည် ..။စံစံ့ ဖေါင်းမို့တဲ့ အင်္ဂါစပ် ကို ပွတ်သပ်နေ သည် ..။ သူ့ လက်ချောင်းတွေက အင်္ဂါစပ် အပေါ်ဘက် ဆီ က အမွှေးလေးတွေကို ဖွသလို ကိုင်နေလိုက် ..အင်္ဂါစပ် အကွဲကြောင်း တလျောက် ပွတ်သပ်လိုက် နဲ့ စံစံ မှာ ထွန့်ထွန့်လူးနေရပြီ ..။
စံစံ တဟင်းဟင်း နဲ့ ပေါင်တွေ ထောင်လိုက်ကားလိုက် ဖြစ်လာ သည် ..။ စံစံ့ အင်္ဂါစပ် သည် အရေတွေ စိုစို ရွှဲနေပြီ . .။ အော်ကြီး စံစံ့ပင်တီလေး ကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ဆွဲချွတ်လိုက်သောအခါ စံစံ တင်ပါးတွေကို ကြွပေးလိုက်မိ သည် ။ စံစံ ရဲ့ ဗလာကျင်း သွားသော အောက်ပိုင်း ကို အော်ကြီး စပြီး နမ်းရှုံ့သောအခါ စံစံ သည် သူမ အင်္ဂါစပ် အရမ်း ပေကျံနေတာမို့ အော်ကြီး ကို အားနာ လို့ ..“ ကိုအော်ကြီး ..မလုပ်နဲ့..ပေစိုနေတယ် …” လို့ တား သည် ..။ အော်ကြီး အရမ်း ထန်နေပြီ ..။ ဖေါင်းကြွနေသော အင်္ဂါစပ် ရဲ့ အကွဲကြောင်းတလျောက် လျာကြီး နဲ့ စုံချီ ဆန်ချီ ယက်ပေးနေ သည် ..။ စံစံမှာ ..တကယ်တော့ ဒီလို အတွေ့အကြုံမျိုး ကို တောင့်တနေရတာပါ ..။ အခုတော့ သူမလိုလားတာတွေ အော်ကြီး က ဖြည့်ဆည်းပေးနေပြီ …။ အော်ကြီး လျာကြီး က အစိလေးကိုလဲ ပွတ်ထိ ကလိပေးနေ သည် ..။ အို . .ကိုအော်ကြီး . .တော်..တော်ပါတော့ . .စံစံ သေရပါတော့မယ် . . .။
စံစံ မှာ အင်္ဂါစပ်ထဲ က တအားကို ယားယံနေပြီး ..ခံချင်စိတ်တွေ ထိန်းလို့ မရအောင်ဘဲ ပေါ်ပေါက်နေရပြီ ..။ အော်ကြီး လဲ တအား စိတ်တွေ ပြင်းပြနေပြီ မို့ စံစံ့အပေါ် တက်ခွကာ လုပ်လေ သည် ..။ စံစံရဲ့ ဖူးကြွနေသော ရင်သားတွေကို သူ နမ်းလိုက် စို့လိုက် လုပ်ပေးရင်း စံစံ့ အထဲကို သူ့လိင်တန်ကို ထိုးသွင်း တော့ စံစံ အပျိုဖေါ်ဝင်စထဲက စိတ်ကူးတွေယဉ်ကာ တောင့်တနေရတဲ့ ယောင်္ကျာ လိင်အင်္ဂါ ကို အမှန်တကယ် ရရှိနေပြီမို့ စိတ်တွေ တအား လှုပ်ရှား သလို ကျေလဲ ကျေနပ် နေမိ သည် ..။ အလွန်အမင်း လိုလားတောင့်တ နေတာမို့ ..နာကျင်မှာကိုတောင် မကြောက်..မမှုဘဲ …ပေါင်တွေကို ကားပေး နေ သည် ..။ “ စံစံ ..အိုကေလားဟင် …” အော်ကြီး က စံစံ့ ရင်သား ထိပ်သီးလေးတဖက်ကို လျာထိပ် နဲ့ ထိုးမွှေပေးပြီးနောက် မေးလိုက် သည် ..။
“ အင်း..အင်း …” စံစံ လဲ ခေါင်းလေး ညှိမ့်ပြပြီး..သူ့ကျောပြင်ကြီး ကို ဆွဲဖက်လိုက် သည် ..။ အို ..သူ ..သူ ..ထိုးသွင်းလိုက်..တိုင်း တကိုယ်လုံး တဖျတ်ဖျတ် တုန်အောင် ကောင်းသွားရသလို သူ ပြန်ဆုတ်သွားရင်လဲ အင်္ဂါစပ် အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်သွားပြန်တာမို့..အရသာ ထူးကဲလှပေ သည် ..။ အော်ကြီးမှာလဲ တင်းကျပ်နေသော စံစံရဲ့ အပျို အင်္ဂါစပ် ကို လုပ်ရလို့ အရသာ ထူးကဲနေ သည် ..။ အသွင်းအ ထုတ်တွေက အစပိုင်းမှာ ခက်ခဲပေမဲ့ တဖြေးဖြေး နဲ့ အဆင်ပြေလာ သည် ..။ ဖြေးဖြေးလေး ၀င်ထွက်နေရာက အရှိန်ရလာတော့ မြန်လာ သည် ..။ ပြင်းလာ သည် ..။ အော်ကြီး က မြန်မြန် လုပ်လာသလို စံစံကလဲ မြန်မြန် လုပ်စေချင်လာ သည် ..။ အော်ကြီး ဆောင့်ထည့်လိုက်တိုင်း..စံစံလဲ ..အား..အား..နဲ့ အော် သည် ..။ သူမ ခြေထောက်တွေကို မြှောက်တင် ကာ အောက်မှ ကော့ကော့ပေးလာ သည် . .။
အရှိန်ပြင်းပြင်း ..ဆက်တိုက် ထိုးဆောင့်ရင်း ..နှစ်ဦးစလုံး ..ကာမ ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ကို တက်လှမ်းသွားကြ ရ သည် …။ ဘယ်ကျော် သည် ဆိုင်ထဲမှာ မီးလင်းနေတာ တွေ့ရတော့ အော်ကြီး နဲ့ စံစံ တခုခု ဘဲဆိုပြီး..အနှောက်အရှက် မလုပ်လိုလို့ အပြင်ကဘဲ အသာလေး စောင့်နေ သည် ..။ တနာရီလောက် သူ ကားထဲ ထိုင်စောင့်နေ သည် ..။ အော်ကြီး နဲ့ စံစံ ဆိုင်ထဲက ထွက်လာပြီး ဆိုင်တံခါး သော့ပိတ်နေတော့မှ သူ သွားလိုက် သည် ..။ “ ဟာ..ဘယ်ကျော် ..” “ ကိုအော်ကြီး အတွက် ပေးစရာ ရှိလို့ လာခဲ့တာ ..” “ဟင်..ဘာလဲ..ဘာပေးမှာ လဲ …” “ ကားထဲမှာ..ခဏ လိုက်ခဲ့ပါလား ..” စံစံ လမ်းလျောက်တာ ကွတတ ဖြစ်နေတာ ဘယ်ကျော် သတိထားမိ သည်။ ဘယ်ကျော် လာပေးတာ က သေနတ်တလက် ဖြစ်နေ သည် ..။
“ဟာ ..ငါ မလိုချင်ဘူး ဘယ်ကျော် ..ငါ ဒီနိုင်ငံမှာ အေးအေးဆေးဆေး ဥပဒေဘောင်ထဲ ကဘဲ နေသွားမယ် လို့ မှန်းထားတယ် ..တော်ကြာ ထောင်ထဲ ၀င်နေရဦးမယ် ..ခုတောင် ဟိုတခါ အမဲကောင်တွေကို ရိုက်သတ်မိထားတာ ကံကောင်းလို့ ထောင်မကျတာ ..” “ အင်းလေ..ဒါကတော့ ကိုအော်ကြီး သဘောပါ .ကျနော် က လူမဲတွေ လာဆော်ရင် လက်ဗလာချည်း ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ စေတနာနဲ့..ယူလာပေးတာ …” “ မင်း စေတနာ ကို လေးစားပါတယ်ကွာ ..ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ် ..တရားမ၀င် သေနတ် ဆောင်ထားရမှာကြီး က ည အိပ်ပျော်မယ် မထင်ဘူး . .” ဘယိကျော် သူလာပေးတာကို မယူလို့စိတ်တော့ သိပ်ပျော်ပုံမရ ..။ အော်ကြီး နဲ့ စံစံ့ကို သူ ကားနဲ့ လိုက်ပို့ပေး သည် ..။
အော်ကြီး နဲ့ ဆိုင်က စတိုခန်းလေးထဲ ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့ပေမဲ့ နောက်တနေ့ ဆိုင်မှာ ပြန်ဆုံတော့ စံစံ လဲ ရှက်ကိုး ရှက်ကန်း ဖြစ်နေ သည် ..။ စတိုခန်းထဲ ဆီပုံး ၀င်ယူချိန် အော်ကြီး က အနောက် က လိုက်ဝင်လာပြီး မနေ့ညက နှစ်ပါးသွားခဲ့တဲ့ ဆန်အိတ်တွေ နားမှာ စံစံ့ ကို ဆွဲဖက်လိုက် သည် ..။, “ကိုအော်ကြီး …သူများတွေ မြင်ကုန်မယ် …” “ ချစ်တယ် . .စံစံ ရယ် ..အရမ်း ချစ်တာဘဲ ..” အော်ကြီး က စံစံရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး ကို စုတ်နမ်းလိုက် သည် ..။ သူ့လက်တွေကလဲ စံစံ့တင်သားတွေကို ဖျစ်ညှစ်နေသည် …။ အော်ကြီး ရဲ့ သံမဏိချောင်း တုတ်တုတ်ကြီး ဒိုင်းကနဲ ထကြွ သန်မာလာ သည် ..။ “တော်..တော်ပြီ ..မမသက်ထား …၀င်လာရင် တွေ့သွားမယ် . .” အော်ကြီး ရဲ့ လက်ချောင်း တွေ က စံစံ့ပေါင်ကြား ဂွဆုံ ကို ပွတ်သပ်နေ သည် ..။ “ကိုအော်ကြီး …ည….ညကျမှကွာ…နော် …နော်..လိမ္မာပါတယ် …နော်..ည မှ..” “ဟင်း …. ” စံစံ စတိုခန်းထဲက ပြေးထွက်သွား သည် . .။
အော်ကြီး ရေကို ကျကျနန ချိုးနေ သည် ..။တကိုယ်လုံး အနှံ့ ဆပ်ပြာ နဲ့ တိုက်ချွတ် ပြီး ရေပူ.ပူ နဲ့ ချိုးနေသည်။ စောစောကဘဲ အော်ကြီး သည် ဆိုင်မှာ သူနဲ့ စံစံ နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ကျန်နေချိန်မှာ သူလုပ်နေကျ စတိုခန်း မှာ စံစံ နဲ့ တူယှဉ်တွဲကာ အချစ်လွန်ပစ်ခဲ့ကြ သည် . . ။ တီ…တစ်…တီတစ် ….တီ တစ် . .. . ရေချိုးခန်း ထဲက စင်လေး မှာ သူ တင်ထားသော ဖုန်း မြည်လာ သည် ..။ ရေပန်းခလုပ်ကို လှည့်ပိတ်လိုက်ပြီး ရေချိုးကန်ထဲက လှမ်းထွက်..ဖုန်းကို ကိုင်လိုက် သည် …။ “အော် …. နာတာရှား…ပါ …” “နာတာရှား …ဘာထူးလဲ ….. ” “ မထူးပါဘူး.. အော်..အခန်း မှာလား ..ဘယ်သူရှိလဲ …” “ တယောက်ထဲဘဲ ..” “ ငါ ခဏ လာခဲ့မယ် ..ပြောစရာ ရှိလို့ . . .” အော်ကြီး အခုနေနေတဲ့ အခန်းက နာတာရှား ရှာပေးတာ ဖြစ် သည် ..။အော်ကြီး အ၀တ်အစား လဲပြီးချိန် တင်း..တောင်..ဆိုပြီး အခန်းဝက လျှပ်စစ်ခေါင်းလောင်းသံ ကြားလိုက်ရ သည် . .။
နာတာရှား ..ရောက်လာ သည် ..။ နာတာရှား သည် တော်တော်လေး ရေချိန်ကိုက် လာ သည် ..။ အာသွက်လျာသွက် ဖြစ်နေ သည် ..။ သူမ ကုတ် ကို ချွတ်လိုက် တော့ ညာဘက်ခါးမှာ သေနတ်တလက် ချိတ် ထားတာ တွေ့ရ သည် ..။ အော်ကြီး က သူမ ကုတ်ကို ချိတ်ပေးလိုက် သည် ..။ “ အော် ..လူမဲတွေ အတွက် က မပူပါနဲ့ ..ဟိုတတခါ ထဲက ဒို့တတွေ နဲ့ ရင်ဆိုင်တိုးသွားတော့ မင်းကို လွယ်လွယ် နဲ့လာ ရန်ရှာရဲတော့မယ် မထင်ဘူး . . .ငါ လဲ သူတို့ကို လိုက်နေတယ် ..တနေ့ မိမှာပါကွာ . .” အော်ကြီး က သူ နာတာရှား အတွက် ကြုံရင်ပေးမယ် ဆိုပြီး ၀ယ်ထားတဲ့ ..၀ိုင်ပုလင်း ကို ထုတ်ပေး သည် ..။ “အော်..မင်း က ငါ့ကို သတိရတယ် ပေါ့ ..ခစ်ခစ် …” “ ရတာပေါ့ ..နာတာရှားရယ် ..မင်း က ငါ့ အပေါ် အရမ်း ကူညီတဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတယောက် ဘဲ ..”ား “ကျေးဇူး တင်တယ်..အော် . . ” နာတာရှား ၀ိုင်ပုလင်း ကို ဖေါက်လေ သည် ..။
“ အော် ရော သောက်မယ် မှုတ်လား ..”ိပေမဲ့ အော်ကြီး သည် ၀ိုင်မကြိုက်လို့ သောက်လေ့မရှိပေမဲ့ သူမ အဖေါ်ရစေဖို့ ..သောက်မယ် လို့ ပြောလိုက် သည်။ ၀ိုင် တပုလင်း ကို စကား တပြောပြော နဲ့ မြေပဲကြော် နဲ့ သောက်ကြ လေ သည် . .။ “ အော်..မင်း လုပ်တဲ့ မြန်မာအပြုတ် ..ငါ ကြိုက်တယ် …ဘာခေါ်သလဲ မေ့သွားပြီ …” “ ကြေးအိုး …” “အင်း ..အဲဒါ..အဲဒါ …. ” “ ကြိုက်ရင် ဆိုင် လာ စားလေ . .” “ အော် . .မင်း က တရုတ်ဟင်းတွေ လက်ရာကောင်းကောင်း နဲ့ ဒီလောက်တောင် ချက်တတ်တာ ..ကိုယ့်ဖါသာ ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ ကောင်းတယ် . . ” “ ဆိုင်ဖွင့်နိုင်လောက်တဲ့ ငွေရေးကြေးရေး အနေအထား မရှိသေးပါဘူး ..နာတာရှား ..” “ အော် ဖွင့်မယ် ဆိုရင်..ငါ က ငွေစိုက်နိုင်ပါတယ် ..” “ အခုတော့ မဖွင့်သေးပါဘူး . .” “အော် ..အော့်ကို သေနတ်ပစ်နည်း တွေ သင်ထားပေး၇အုံးမယ် …“
“ အင်း ..သင်ချင်တယ် ..နယူးရောက် က သေနတ်ကိုင်ခွင့် ပိတ်ထားတဲ့အတွက် သင်လဲ သိပ်တော့ မထူးဘူး မှုတ်လား …” “ မှန်တယ် ..ဟင်းဟင်း..တခုတော့ ပြောပြမယ် ..တကယ်တမ်း ..ကိုယ့်ကို အသက်လာ ရန်ရှာမယ် ဆိုရင် ကိုယ့် အသက် ဒါမှ မဟုတ်..မိသားစု အသက် အတွက် ကာကွယ် ခုခံမယ် ဆိုရင် ..ဥပဒေ က သေနတ် ဟာ တရားဝင် ရမယ်လို့ မဆိုထားဘူး ..ကာကွယ်ဖို့..ကာကွယ်လိုက်နိုင်ဖို့ ကဘဲ အဓိက ဆိုတော့ ..တကယ်တမ်း ဖြစ်လာရင်တော့ ..သုံးနိုင်ပါတယ် ..အဲ..တခုဘဲ ..ဒီကြားထဲ ရဲ က ကိုယ့်လက်ထဲ မိသွားရင်သာ ခက်မှာ . .” “ နေပါစေတော့ နာတာရှား ..ဟီး ..ဒုတ် ဘဲ သုံးတော့မယ် …တရားဝင် သေနတ် ကိုင်နိုင်မှဘဲ ကိုင်တော့မယ် ” “ ကဲ လာ ..သေနတ်ပစ်နည်း တွေ ပြပေးမယ် …” နာတာရှား က အော်ကြီး ကို သေနတ်ပစ်နည်း..ကိုင်တွယ် အသုံးပြုနည်းတွေ ပြသ အပြီး အော်ကြီးက လဲ နာတာ ရှား ကို ပြန်ပြီး ပြသ လေ သည် ..။ မှောက်ရက် ပုံစံ..ပက်လက် ပုံစံ..ဘေးစောင်း နဲ့ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ပုံစံ များ ဖြစ် သည် ..။
အော်ကြီး ပြသတာများ က နာတာရှား ကို ကာမ သုခတွေ အပြည့်အ၀ ရရှိစေတဲ့ ကာမစပ်ရှက်ပေးခြင်းတွေ ပါဘဲ . .။ နာတာရှား သည် အော်ကြီး စပ်ရှက်ပေးတာတွေ ကို အလွန် သဘောကျသွားပြီး တညလုံး . .တချီပြီး တချီ..တပွဲပြီး တပွဲ နွှဲရလေ တော့ သည် ..။ မနက် မိုးလင်းလို့ နာတာရှား ပြန်သွားပြီးနောက် ..အော်ကြီး လဲ ပြန်အိပ်ပျော်သွား လိုက်တာ စံစံ ဖုန်းဆက်ခေါ်တော့မှ နိုးလာရ သည် . .။ စောကျော် က သူနဲ့ အတူတူ နယ်စပ် စခန်း က လာခဲ့ တဲ့ ဘော်ဒါတွေ ရှိတဲ့ မင်နီဆိုးတား ဘက်ကို သွားလည်ချင် သည် လို့ ပြောလာသောအခါ ဖြူသီခိုင် သည် ၀မ်းသာအားရ သွားခိုင်းလေ သည် . .။ စောကျော် ကို သူ့ဘော်ဒါတွေကို ပေးဖို့ လက်ဆောင်များ လဲ ၀ယ်ပေးလိုက် သည် . .။ ဖြူသီခိုင် မှာက လဲ အကြံနဲ့ . .။ စောကျော် လဲ ထွက်သွားရော..အော်ကြီး ကို သူမ အိမ် ကို ခေါ်ပြီး ဟင်းချက်နည်းများ သင်ခိုင်းလေ သည် . .။ သို့ပေမဲ့ အော်ကြီး သင်ပေး ပြပေးတာများ က ဟင်းချက်နည်းတွေတော့ မဟုတ်ဘူး . .။ ဖြူသီခိုင် သိပြီး..တတ်ပြီးသား တွေ ပါဘဲ . .။ ဖြူသီခိုင် စိတ်ကျေနပ်မှု အကြိမ်ကြိမ် ၇ရှိရအောင် အော်ကြီး စွမ်းဆောင် ပေး လိုက် သည် . .။
ဖြူသီခိုင် လဲ အော်ကြီး နဲ့စပ်ရှက်ရ တာတွေ ကို အစွဲကြီး စွဲသွားရတော့ သည် . .။ “မေထိန် နဲ့ ကိုကျော်စွာထွန်း လက်ထပ်လိုက်ကြပြီ…တဲ့…” သက်ထား က မေထိန့်ဆီက ဖုန်းရလို့ အော်ကြီး နဲ့ စံစံ့ကို လာပြောပြ သည် ..။ “ မမမေထိန် ..ဒီပြန်လာမယ်တဲ့လား ..မမ ” “ အင်း ..တလ..နှစ်လလောက် အတွင်း ပြန်လာမယ် ပြောတာဘဲ ..ကိုကျော်စွာထွန်း က နောက်တော့ ဒီလိုက်လာ မယ်…တဲ့..” “ ကိုကျော်စွာထွန်း က စားသောက်ဆိုင် အလုပ် သိပ်ကျွမ်းတာ မမသက်ထားရေ ..သူ လိုက်လာရင်တော့ဒီမှာ သူ့ အကြံဥာဏ် နဲ့ တတ်ကျွမ်းတာတွေ နဲ့ ဆိုင်လုပ်ရင် အရမ်း အောင်မြင်မှာဘဲ . .” ဒီနေ့ သက်ထား ဆိုင်ပိတ်ချိန်အထိ လုပ် သည် ..။ စံစံ နဲ့ အော်ကြီး ကို သက်ထားက အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးမည် လို့ ပြောသည် ..။ စံစံ က ..“ မပို့နဲ့တော့ မမ ..စံစံ နဲ့ ကိုအော်ကြီး ..ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မလို့ ..စံစံတို့ ဖါသာဘဲ သွားလိုက်တော့မယ် ..“ လို့ ပြော သည် ..။
သက်ထား လဲ ပြုံးစိစိ ဖြစ်သွားပြီး ..“ အော် ..ကောင်းတာပေါ့ ..ခစ်ခစ် ..ဘာကားသွားကြည့်ကြမှာတုံး…” လို့ မေး သည် ..။ စံစံ က ..“ ကုလားကား..မမ ..ဒီနားက ရုံမှာ ကုလားကား အမြဲတင်တယ် ..” လို့ ဖြေ သည် ..။ အော်ကြီး နဲ့ စံစံ ဆိုင်ကနေ အတူတူ လမ်းလျောက်ထွက်သွားကြတာ သက်ထား ကြည့်ပြီး သဘောကျ နေ သည် ..။ သူတို့ နှစ်ယောက် ဖြစ်သွားကြတာ သက်ထား ..မနာလို မဖြစ် ..။ သူတို့ က မီးဖိုထဲ ချက်ပြုတ် တာလဲ တော် သည် ..။ သူတို့ နှစ်ယောက် သည် လိုက်ဖက်ညီ သည် လို့ သက်ထား ထင် သည် ..။ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ စံစံ သည် အော်ကြီး ရင်ခွင်ထဲမှာ ရောက်နေ သည် ..။ ကုလားကားရုံက ကြည့်သူ မရှိသလောက်ဘဲ ..။ စံစံက “ သူတို့ ရှုံးမှာဘဲနော် ..”လို့ ရယ်ပြီး ပြော သည် ..။ အော်ကြီး က ..“စံစံ ..ဒီက အပြန် ကိုယ့်အိမ် လိုက်ခဲ့ပါလား ..စံစံ နဲ့ အားရအောင် ချစ်ချင်တယ် ..”လို့ ပြောတော့ စံစံ လဲ သဘောတူ သည် ..။ အော်ကြီး နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ကြပြီး ဆိုင် က စတိုခန်းထဲက ဆန်အိတ်ပုံပေါ်မှာဘဲ နှစ်ပါးသွားခဲ့ရတာ ကြာ ပြီ ..။ စိတ်တွေ က တအားထန်နေတော့ တွေ့ရာနေရာ မှာ ဖြစ်သလို လုပ်ခဲ့ကြ သည် ..။ ရုပ်ရှင်က အပြီး အော်ကြီး နဲ့ လက်ချင်းတွဲကာ အော်ကြီး တိုက်ခန်းကို သူတို့ သွားကြ သည် ..။
“ စံစံ ဆာလား ..တခုခု စားအုံးမလား …” “ ဟင့်အင်း…မဆာဘူး ..အကိုရော ဆာလား ..” “ မဆာဘူး ..စံစံ နဲ့ ချစ်ရမှာကိုဘဲ တွေးပြီး ၀မ်းသာနေတယ် …. ” တရုတ်တန်း ထဲမှာမို့ ဟင်းနံ့..အကင်နံ့တွေ က လေအဝေ့မှာ….သင်းပျံ့နေ သည် ..။ နယူးယောက် တရုတ်တန်း သည် စည်ကားနေ သည် ..။ လမ်းဘေးဈေးသည် တွေ လဲ ခင်းရောင်းနေကြ သည်။ “အကို..တချို့ တရုတ်ဈေးသည်တွေ က အင်္ဂလိပ် လို မတတ်ဘူး ..သိလား ..” “ တချို့က သင်္ဘော ၀မ်းဘိုက် ထဲ ပုံးပြီး လိုက်လာတဲ့ လူတွေ ဖြစ်မယ် ..အခုမှ ရောက်လာတာ ဖြစ်မယ်..”ိုချင်လား “ အကိုရေ..ကြည့်ပါအုံး ..လိပ် ပေါက်စလေးတွေ ရောင်းနေတယ် …ချစ်စရာလေးတွေ ..” “ စံစံ လိုချင်လား ..ကိုယ် ၀ယ်လိုက်မယ် လေ …” “မလိုချင်ပါဘူး…အကို ..တော်ကြာ အစာကျွေးရမှာ နဲ့ ..စံစံတို့က အလုပ်ကလဲ ခပ်များများ…” အော်ကြီး ရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ဘယ်တော့ လူမဲတွေ သူ့ကို လာသတ်နိုင်တယ် ဆိုတာ သတိရနေ သည် ..။ လူမဲ မြင်တိုင်း ..သူ့ကို လာဆော်မဲ့ ကောင်လား..ထင်နေမိ သည် ..။
မဖြစ်ပါဘူး..ဒီကနေ ခြေရာဖျောက်ပြီး တခြား ပြည်နယ် တခုခု ကို ရွှေ့မှ ဖြစ်မှာပါ …။ “စံစံ..ကိုယ်လေ..စံစံ့ကို သိပ်ချစ်တာဘဲ …” “တကယ်လား …အကို့ကို ဟို ဆူရှီသူဌေး မဖြူသီ က ညုတုတု နဲ့ အထာ ပေးပေးနေတာ စံစံ မသိဘူး မ ထင် နဲ့ …” “ စံစံ က တော်တော် အကင်းပါးတာဘဲ ..ခိခိ . .” “ ဟွန်း ..ဟုတ်တယ်မှုတ်လား …” “ ကိုယ် က စံစံ ရှိနေတာဘဲ ကွာ…” “ အကိုနော် ..မသိရင် ခက်မယ် …” စံစံက အော်ကြီး ရဲ့ လက်မောင်း ကို သူမ လက်သီးဆုတ်လေး နဲ့ ထု သည် ..။ ဓါတ်လှေခါး နဲ့ အော်ကြီး နေတဲ့ ငါးထပ် က အခန်းကို ရောက်လာ သည် ..။ စံစံ့ခါးလေးကနေဖက်ပြီး သူ့ အခန်းထဲ ၀င်လိုက် သည် ..။ “ စံစံ ရေချိုးမလား ..” “ ကောင်းသားဘဲ..ဆိုင်မှာ ဒီနေ့ ငပိကြော်တွေ ကြော်တာ တကိုယ်လုံး နံစော်သွားတယ် ..ဟိဟိ ..” “ ဒါဆို စံစံ နဲ့ ကိုယ် နဲ့ အတူတူ ရေချိုးကြမယ် လေ …“ ဒီလို ဆိုတော့ လဲ စံစံ ကိုအော်ကြီး နဲ့ ရေအတူတူ ချိုးရမှာ ရှက်သလိုလို ဘဲ ..။ ဆိုင်က စတိုခန်းထဲမှာ လွန် လွန်ကျူးကျူးတွေ ဖြစ်ဘူးတယ် ဆိုပေမဲ့ ..အဲဒီတုံး က စိတ်တွေကလဲ မွှန်နေတာ..ကြွနေတာ လေ ..။ “ အကိုချိုး..အရင်ချိုး..ပြီးရင် စံစံ ချိုးမယ် …” “ ဟင့်အင်း ..လာ..လာ ..စံစံ နဲ့ အတူတူ ဘဲ ချိုးမယ် …” အော်ကြီး က စံစံ့ ခါးလေး ကနေ ဆွဲဖက်ပြီး ရေ ချိုးခန်းကို ခေါ်သွား သည် ..။
စံစံ့ အ၀တ်တွေ ကို ချွတ်ရတော့ စံစံ ရှက်သလို ဘဲ ..။ “ မကြည့်နဲ့ကွာ ..အကို့…” “စံစံကလဲ ခုမှ တွေ့ဘူးတာမှ မဟုတ်တာ ..” “ အိုး..မပြောနဲ့ …” စံစံကော အကိုကော ..ကမ္ဘာဦး အစ က အာဒံ နဲ့ ဧ၀ လို ကိုယ်တုံးလုံးတွေ ဖြစ်သွားနေပြီ …။ စံစံ လဲ ခေါင်းကို တဖက်လှည့်ထား သည် ..။ အကို က ရေချိုးကန်ထဲကို စံစံ နဲ့ အတူတူ ၀င်တဲ့အချိန်ထဲကစပြီး ပြီး စံစံ့ ရင်သားတွေကို ကိုင်တော့တာဘဲ ..။ စံစံ လဲ အကို့ပေါင်ကြားက ရှည်လမျော အတန်ချောင်းကြီး ကို မြင်ရတာ နဲ့ ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်း ခုံလာပြီး ..ခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာရတော့ အကို က စံစံ့ တကိုယ်လုံး ကို ဆပ်ပြာ နဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးတော့ စံစံကလဲ အားကျမခံ အကို့ လိင်တန်ချောင်းကြီး ကို ကိုင် ဆုတ် ပွတ်တိုက်ပေးမိပါ သည် …။ နှစ်ယောက်စလုံး .ကာမစိတ်တွေ ထကြွနိုးကြားလာပြီး ..အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်ဆီကို အမြန်ဆုံး ရောက်လှမ်းမိ ကြရတော့ သည် ..။ နှုတ်ခမ်းချင်း စုတ်နမ်းတာလဲ လျာတွေ နဲ့ လုံးထွေး နေကြ သည် ..။ အကို က စံစံ့ ရင်နှစ်မွှာ ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဘဲ ကိုင်ဆုတ်တော့ တာဘဲ ..။ စံစံ့ တင်ပါးတွေကိုလဲ ဒီလိုဘဲ ..။ ဂျုံနယ်သလို ဆုတ်နယ်တာ ..။ အနယ်ခံရတဲ့ စံစံက လဲ ကြိုက် သည် ..။ အကို စံစံ့ အဖုတ် ကို နမ်းလဲနမ်း စုတ်လဲ စုတ် သည် ..။
စံစံ့အဖုတ် ထဲ သူ့လျာကြီး အတင်းကြီး ထိုးထိုး ၀င်လာ သည် ..။ စံစံ လဲ တုန်ခါနေအောင်ဘဲ..ကောင်းနေ သည် ..။ အကို ပြောတာမှန် သည် ..။ စတိုခန်းထဲဖြစ်သလို လုပ်ကြ တာမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ ..အ၀တ်မပါဘဲ ကုတင်ပေါ် စိတ်လွတ်လက်လွတ် စပ်ရှက်ရတာ တော်တော် ကောင်း သည် ..။ စံစံ လဲ အကို နဲ့ အပီ ချစ်ပစ်လိုက်မည် ဆိုပြီး မရှက်တော့ ..။ အကို က လေးဘက်ကုန်းခိုင်းလာ တော့လဲ အကို့ စိတ်ကြိုက် ကုန်းပေးလိုက် သည် ..။ လေးဘက် ကုန်း သည် ဆိုပေမဲ့ ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ရတာ ဆိုရင် ပိုမှန်လိမ့်မည် ..။ ထောင်ထားတဲ့ စံစံ့တင်ပါးတွေ ကို အကို ကိုင်ပွတ် နေပြီးမှ စံစံ့ အဖုတ် ကို သူ နမ်း ပြန် သည် ..။ လျာ ကြီးနဲ့ ယက်တာ ..တပြတ်ပြတ် တပြိပြိ အသံတွေ နဲ့ စံစံ့ အဖုတ် လဲ တအား ယားသထက် ယားလာရ သည် ။ “ အကိုး ….တော်ပြီ..တော်ပြီ …. ” စံစံ မနေနိုင်တော့ ..။ အကို ယက်တာတွေ ဆက် မခံနိုင်တော့ …။ ခံချင်လှပြီ …။ “ ချစ်ပေးရတော့မလား ..စံ..” “ အင်း…အင်း …အကို…ချစ်…ချစ်…ချစ်ပေးပါတော့ …. ” ဖင်ထောင်ပေးထားတဲ့ စံစံ့ကို အကို လုပ်ပြီ ..။ ထွားလွန်းတဲ့..ကိုအော်ကြီး ရဲ့ လိင်တန် တုတ်တုတ်ကြီး က ဇိကနဲ ၀င်လာတာ အတွင်းသားတွေ ကို မတရားကြီး ထိုးပွတ် သွားတာ စံစံ့ အကြောပေါင်းတထောင် စိမ့်သွား ရတော့တာဘဲ …။
“ အီး ..အကို .ဖြေးဖြေး …” အကို့လိင်တန်ကြီး ကဆက်ထိုးလို့ မရဘဲ တစ်ဆို့ကြီး ဖြစ်နေတော့ အကို က အနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး တခါ ပြန်ထိုးထည့်ပြန် သည် ..။ စံစံ့မှာတော့ ..” အား…..အား…..အား…..” နဲ့ အော်နေရ သည် ..။ ခဏကြာတော့ စံစံ့အဖုတ် က အကို့ လိင်ချောင်းကြီး ကို တချောင်းလုံး အသွင်းခံနိုင်သွားပြီ ..။ အကို့ အမွှေးကြမ်းကြမ်းလိန် ကောက်ကောက်တွေ စံစံ့ တင်ပါးအိအိတွေကို ထိကပ်နေတဲ့အထိ..လိင်တန် အရင်းအထိ ၀င်နေပြီ ..။ စိတ် ထဲမှာ တမျိုးကြီး ခံစားရ သည် ..။ အကို့ ဟာကြီး တခုလုံး..စံစံ့ အထဲ ရောက်နေလို့ ..။ နှစ်ကိုယ့်တကိုယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့…။ “ချစ်လား..စံစံ …. ” “ အင်း…ချစ်တယ်..အကို..တအား ..တအား..ချစ်တယ် …” “ အကိုလဲ စံစံ့ကို အရမ်းချစ်တယ် …” အကို က ပြောပြောဆိုဆို စံစံ့ကို လုပ်ပါပြီ..။ အသွင်းအထုတ် လုပ် ပြီ..။ ပက်ပက်စက်စက် ပြောရရင် ..လိုးနေ ပြီ ..။ အကို့ထိုးနှက်ချက်တိုင်းက အ၀င်ရော အထွက်ရော..စံစံ့ကို အီဆိမ့်နေတဲ့ ကာမ အရသာထူးတွေ ကို ပေး သည် ..။
“ ကောင်းလား..စံစံ…” “ အင်း..အင်း ..အရမ်းကောင်းတယ် …” “မြန်မြန် လိုးမယ် နော် ..” “ အင်း..လိုး…လိုး …” စံစံ့ပါးစပ် က တခါဘူးမှ ဒီလို စကားလုံးမျိုး မသုံးဘူးခဲ့ပေမဲ့ အကို နဲ့ သုံးနေမိပြီ ..။ စိတ်တွေ က တအား ကြွထ နေတာကိုး ..။ အကိုဆောင့်ထည့်တိုင်း စံစံ အဖုတ်ထဲကျင်ကျင် သွားရ သည်. . .။ ဖွတ်..ဖစ်..ဖွတ်ဖပ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ လဲ ဆူညံနေ သည် ..။ အကို ဆောင့်လိုက်တိုင်း စံစံ့ ရင်သားစိုင်တွေ လဲ တုန်ခါနေ သည် ..။ တော်တော် လဲ အလိုးကြမ်းတဲ့ အကို ..။ ရေရေလည်လည့်ကို ဆောင့်ဆောင့် လုပ်နေတာ ..။ ဖတ်ကနဲ ဖေါင်းကနဲ အသံတွေ မြည် သည် ..။ သူ့ဆီးခုံ နဲ့ စံစံ့ တင်ပါးတွေ တအားထိခိုက် ရိုက်ခတ် တဲ့ အသံတွေ ပေါ့ …။ အကိုဆောင့်တာတွေ ပြင်းလွန်းလို့ စံစံ အေ၇ှ့ကို လဲကျမသွားအောင် မနဲ တောင့်ခံထားရ သည် ..။ ဖင်ပူးတောင်းထောင်ပေးရာ က အကို က ပုံစံ ပြောင်းရအောင် လို့ ပြောလာပြန် သည် ..။ စံစံ လဲ ပက်လက် အိပ်ပေးလိုက်တော့ ..အကို က အပေါ်တက်ခွ ပြီး ဒလကြမ်း ဆောင့်ပေးတော့တာဘဲ ..။ တဖြောင်းဖြောင်း ဘဲ..စံစံ လဲ ဘယ်နှစ်ခါတောင် ..ကောင်းသွားသလဲ မသိတော့ဘူး ရှင် ..။ နောက်ဆုံး ..အကောင်းကြီး ကောင်းသွားချိန် အကို့ ပူနွေးနွေး သုတ်ရေတွေ တဖတ်ဖတ် စံစံ့ အဖုတ်ထဲ ပန်းထုတ်လိုက်တာ သိလိုက်ရပါ တော့ သည် ..။ အကိုလဲ ခါးကိုကော့ပြီး သူ့လိင်တန်ကြီး က်ို တဆုံး နှစ်ထားရင်း..“အား….ဟားဟား…..ကောင်း လိုက်တာ စံ ရယ် ….. ” လို့ ညည်းလေ သည် …။
“ အော်ကြီး..ဖုန်းလာတယ် …” သက်ထား က မီးဖို အ၀ ကို လာအော်ပြော သည် ..။ “ဘယ်သူခေါ်တာလဲ ..သက်ထား …” “ ဖြူသီခိုင် . . ” စံစံက နှုတ်ခမ်းလေး စူကာ..“ အကို ..သွားမပြောနဲ့ . .” လို့ ပြော သည် ..။ “ အလုပ်ကိစ္စ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်တယ် …” အော်ကြီး ဖုန်းသွားကိုင် သည် ..။ ဖြူသီခိုင် က ..“ ဟိတ် ..ဆရာကြီး ..ဖုန်းလေးဘာလေး တောင် မဆက်ဘူး ..နေနိုင်လိုက်တာ ..” လို့ ပြော သည် ။ အော်ကြီး လဲ သူနဲ့ စံစံ နဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေကြပြီမို့ ဖြူသီခိုင် နဲ့ တွေ့ဖို့ မလွယ်တော့ကြောင်း ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဘဲ ပြောပြလိုက် သည် . .။ ဖြူသီခိုင် ကတော့ စိတ်မလျော့သေး ..။ “ ဖြူကတော့ သူနဲ့ ထပ်ဆုံချင်သေးတယ် ..သူ တွေ့နိုင်ရင်..ဖြူ့ဆီ ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါ . .” တဲ့ ..။ မီးဖိုထံ ပြန်ရောက်တော့ စံစံ သည် နှုတ်ခမ်းလေး စူထော်ကာ စိတ်ကောက်တဲ့ ပုံနဲ့ ..“ ဘာတဲ့လဲ..ဒီဆော်ကြီး က ..အကို့ကို ညုနေသေးလား …” လို့ မေး သည် ..။ “ ဟင်း အော်ဒါ လုပ်ချင်လို့မေးတာပါ ..စံစံရယ် ..” အော်ကြီး လဲ ဖြူဖွေးတောင့်တင်းသော ဖြူသီခိုင် ကို ဖြုတ်ရတာ အလွန်သဘောကျ သည် ..။ သို့ပေမဲ့ စံစံ နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက် တခြားမိန်းမတွေ နဲ့ လုပ်တာကို ရပ်တန်းက ရပ်တော့မည် လို့ သူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထား ခဲ့ လို့ ..စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး ငြင်းပယ် တာဖြစ် သည် ..။ အော်ကြီး ရဲ့ စိတ်ထိန်းချုပ်တာတွေ ဒီနေ့ည မှာ ပျက်ပြယ်သွားရ သည် ..။
ဒီနေ့ မနက် စံစံရဲ့ အဒေါ်အရင်း ရုတ်တရက် နေမကောင်းဖြစ်ပြီး သတိလစ်သွားလို့ စံစံ သည် နယူးဟေးဗင်း ကို အမြန်လိုက်သွားရ သည် ..။ အော်ကြီး တယောက်ထဲ မီးဖိုထဲ မနိုင်မှာစိုးလို့ သက်ထားက ဘယ်ကျော် ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ရ သည် ..။ ဘယ်ကျော်ကလဲ ဆူရှီဆိုင် ကို သူ့လူတယောက် နဲ့ လွှဲပြီး ..လာကူရ သည် ..။ ဆိုင်သိမ်းခါနီးရောက်တော့ ဘယ်ကျော် က သူ့ဆူရှီဆိုင်ကို ပိတ်ရမှာမို့ သူ နဲနဲ စောစော ပြန်ချင်တယ် လို့ ပြောပြီး ည ခုနစ်နာရီလောက် ပြန်သွား သည် ..။ ပုဂံဆေးသော မက်ဆီကန် နဲ့ မီးဖို အကူ သီရိလင်္ကာ ကုလားလေး ပြန်သွားသောအခါ အော် ကြီး နဲ့ သက်ထား နှစ်ယောက်ထဲ ကျန် သည် ..။ အော်ကြီး လဲ သီရိလင်္ကာကောင်လေး ရှင်းလင်းပေးသွားလို့ သိပ်တော့ လုပ်စရာ မရှိတော့ . .။ဒါကြောင့် ဆိုင် အနောက်ဘက် က အိမ်သာ နဲ့ ရေချိုးခန်းတွဲရက် မှာ ရေအမြန်ချိုးလိုက် သည် ..။ ကုလား မဆလာ ဟင်း တွေ ချက်ရင် ..အရမ်းနံစော်နေတာကြောင့်ဘဲ ..။ ရေကို စိမ်ပြေနပြေ ချိုးတာမျိုး မဟုတ် ..။ အမြန် ပြီးစလွယ် ချိုးလိုက်တာ..ဆိုင်က ရေချိုးခန်းကလဲ ဘာကျဉ်းသလဲ မမေးနဲ့ ..။ ဗြုံးဆို ရုတ်တရက် ရေချိုးခန်း တံခါး ပွင့်လာလို့ အော်ကြီး လန့်သွား သည် ..။ “ဟင်..သက်ထား …” သက်ထား သည် တခစ်ခစ် ရယ်နေ သည် ..။ “ အော်ကြီး . . စံစံ နဲ့ ဖြစ်နေတာနဲ့သက်ထားကိုလဲ ပစ်မထားနဲ့အုံးလေ . .” လို့ ပြော သည် ..။ သူ့ပေါင်ကြား က အတန်ချောင်းကို စိုက်ကြည့်ပြီး…“ ယမ်းမီး …သတိရလွမ်းနေတယ် ..” လို့ ပြော ကာ လှမ်း ဆုတ်ကိုင်လိုက် သည် ..။
အော်ကြီး လိင်တန် ကလဲ သိပ်ပါးတဲ့ကောင်ကြီး..။ မိန်းမတယောက်ရဲ့လက်လေးနဲ့အကိုင်ခံရတယ်ဆိုရင်..ချက်ချင်းဘဲ ထုံးကနဲ မတ်လာ သည် ..။ စိတ်ထဲက သက်ထား ကို ( မကောင်းဘူးဗျာ..စံစံ့ အပေါ် သစ္စာမဲ့တာ ကျနော် မလုပ်ချင်တော့ဘူး ) လို့ ပြော နေပေမဲ့ အပြင်မှာတော့ ပြောလို့ မထွက်ဘူး ဖြစ်နေ သည် ..။ သက်ထား က လာ..လိုက်ခဲ့..ဆိုပြီး စတိုခန်းထဲ ကို လိင်တန်ချောင်းကနေ ဆွဲပြီး ခေါ်သွား တော့ အော်ကြီး ခါးလေးကော့ကာ ပါသွားလေပြီ . .။ ထုံးစံအတိုင်း အရင် လုပ်နေကျ ဆန်အိတ်တွေ အပေါ်မှာ သက်ထား နဲ့ အော်ကြီး ..အကျိတ်အနယ် တွယ်ကြ ပြန် သည် ..။ ပထမ သက်ထား က အပေါ်က ..နောက်တော့ အော်ကြီး က အပေါ်က ..။ ကြာကြာ..ပြင်းပြင်း ကောင်းကောင်းလေး တချီ ဆွဲပေး အပြီး သက်ထား က အော်ကြီး ကို လိုက်ပို့ သည် ..။ သူ့အခန်းပေါ် ပြန်ရောက်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ စံစံဆီက ဖုန်း လာ သည် ..။ စံစံ က သူ့အဒေါ် သတိမရသေးလို့ ဘာဖြစ်အုံးမည် မသိလို့ တရက်နှစ်ရက်တော့ စောင့်ကြည့်ရအုံးမည် လို့ ပြော သည် . .။
စံစံ နဲ့ ဖုန်းပြောအပြီး ..အော်ကြီး ဘိုက်ဆာလာတာ နဲ့ ခေါက်ဆွဲ ကြော်တွေ ရေခဲသေတ္တာထဲ တွေ့တာနဲ့ ပြန်နွှေးပြီး ထိုင်စားနေခိုက် ..ဖုန်းမြည်လာပြန် သည် ..။ ဖြူသီခိုင် ဖြစ်နေ သည် ..။ “ ဟိတ်….ကိုလော်ကြီး..ခစ်ခစ်ခစ် ..သူ့ကိုအော်ကြီးလို့မခေါ်တော့ဘဲ..လော်ကြီးလို့ဘဲ ခေါ်တော့မယ် ..ကြီးလို့ …” “မမ ..ဘယ်က ပြောနေတာလဲ..အိမ်က မဟုတ်ဘူးထင်တယ် ..အသံတွေ ဆူညံနေတယ် …” “ဟုတ်တယ် ..ဒို့..သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ဆိုင်တဆိုင် မှာ စားသောက်နေတာ ..အခု သောက်တာ နဲနဲများသွားတော့ အပြန် ကားမမောင်းနိုင်တော့ဘူး ..အဲဒါ ..ကိုအော်ကြီး ..ဒို့ဆီ လာခဲ့နိုင်မလား …” “ မမ ဘယ်မှာလဲ ..ဆိုင်က ဘယ်လမ်းမှာ လဲ ..” ဖြူသီခိုင် က ဆိုင်နေရာ ကို ပြောပြ သည် ..။ “ ကျနော် အခုဘဲ လာခဲ့မယ် …” အော်ကြီး လဲ အကူအညီတောင်းနေတာ ကို မငြင်းလိုဘူး …. ။ တက်က်ဆီကား နဲ့ ဖြူသီခိုင် ရှိနေတဲ့ ဆိုင် ကို သွားလိုက် သည် ..။ ဖြူသီခိုင် ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့ မိန်းမတယောက် က ဖြူသီခိုင် နဲ့ အတူ အဖေါ်အဖြစ် စောင့်ပေးနေတာ တွေ့ရ သည် ..။ ဖြူသီခိုင် က သူငယ်ချင်း နဲ့ မိတ်ဆက်ပေး သည် ..။
“ သူ က မာရီယာ ..မမ ရဲ့ သူငယ်ချင်း ..သူ က ဘရာဇီးလ် က ..စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ထားတယ်..ကွင်းစ် ရပ်ကွက် မှာ . .” မာရီယာ လဲ ဖြူသီခိုင် လိုဘဲ မူးနေ သည် ..။ မာရီယာ က တက်က်ဆီကား တားပြီး ပြန်သွား သည် . . .။ “ မမ ..ကား ဘယ်မှာ ရပ်ထားလဲ ..” “ဟိုမှာ…” ဖြူသီခိုင် က ကားရပ်တဲ့ ပါကင်ကွက်လပ် ကို ပြ သည် ..။ ဖြူသီခိုင် သည် ဒယိမ်းဒယိုင် ဖြစ်နေ သည် ..။ ဘယ်လောက်များ သောက်ထားလဲ မသိ ..။ အော်ကြီး ပုခုံး ကို မှီပြီး လျောက်သည် ..။ “ မမ..ကားသော့ ကော ..” သူ့ကို ကားသော့ လှမ်းပေး သည် ..။ ရီမုတ် ကို နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့ မလှမ်းမကမ်း မှာ ရပ်ထားတဲ့ ငွေမှင်ရောင် လက်ဇတ်စ်ကားကြီး ဖြစ်နေ သည် ။ “ မမ ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် သောက်လိုက်လဲ …” “ ဟိဟိ ..ပျော်ချင်လို့ .. မမ ပျော်ချင်တယ် …မပျော်ဘူးလေ…မမ ကို ဘယ်သူမှ မချစ်ကြဘူး …ပစ်ပယ်ကြတယ် လေ ..ဒါကြောင့် ပျော်မလားဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ထွက်တာ ..” “ ဟို …စောကျော် ကော ..” “ ဟင့်ဟင့် ..သူလား . .သူ…သူ မမ ကို ပစ်သွားပြီ . .သူ့မှာက ရီးစားဟောင်း ရှိတယ်လေ ..နယ်စပ် စခန်း မှာ ထဲက ချစ်ခဲ့တာ….တဲ့ ..ခု….ရီးစားဟောင်း နဲ့ ယူသွားပြီ …မမ ..မမ….မှာတော့ အချစ်ဟောင်း ရဲ့ လက်ထပ်မင်္ဂလာ ဆိုတဲ့ သီချင်း ကို ဆိုနေရပြီပေါ့ ကိုအော်ကြီး….အဲလေ…ကိုလော်ကြီး ရယ် . ..ခစ်ခစ်ခစ် ..” “ ဟာ..စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ . . ” “ ကိုအော်ကြီး လဲ ဒီလိုဘဲ လေ..မမ ကို မကြိုက်ဘူး..လေ..စံစံမှ…စံစံ မဟုတ်လား . .” အော်ကြီး လဲ ဘာပြောရမှန်း မသိလို့ ဘာမီ မပြောဘဲ ကားဘဲ မောင်းနေလိုက် သည် . .။ ဖြူသီခိုင် သည် စောကျော် လစ်သွားလို့ အသဲကွဲနေတာကိုး …။ ဖြူသီခိုင် ရဲ့ အိမ် က မြို့ပြင်မှာ ..။
အိမ်ရှေ့ရောက် ပြီး ကားရပ်တော့ ..ဖြူသီခိုင် က..“ ကိုအော်ကြီး..အထဲဝင်အုံး နော် ..အေးအေးဆေးဆေး ပေါ့ . .” “ မမ..ကျနော် ..ကျနော် မနက် ..အလုပ်ဆင်းရအုံး မှာ ..ကျနော်..တက်က်ဆီ နဲ့ ပြန်လိုက်မယ် . . . . ” ဖြူသီခိုင် ပါးပြင်မှာ ပုလဲလုံးလေးတွေ စီးကျလာ သည် ..။ ဖြူသီခိုင် ငိုပြီ ..။ “ အော်ကြီး ရယ်..မမ နဲ့ ခဏတောင် မနေနိုင်တော့ဘူးလားဟင် ..မမ ..မမ…ကတော့လေ..သူ့ကို တမ်းတ နေမိတာ မမ…ဘ၀ ကိုက ဆိုးပါတယ် ….ဟင့်ဟင့်..ဟီး……ဟီး….” “အို…မငိုပါနဲ့ မမ ရယ် . . . .” အော်ကြီး ဖြူသီခိုင် ရဲ့ မျက်ရေတွေကို သုတ်ပေး သည် ..။ “ မမ နဲ့ သူ ဒီည နေမယ် မဟုတ်လား . .” “ မမ နေစေချင်ရင် နေမယ် လေ …” ငိုနေတဲ့ ဖြူသီခိုင် ကို ဆွဲဖက်လိုက် သည် ..။ “ မငိုပါနဲ့ မမ ရယ်..မမ ငိုတော့ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ …” ဖြူသီခိုင် ရဲ့ တဆတ်ဆတ် တုန်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းဖေါင်းဖေါင်း တစုံ ကို အော်ကြီး သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးတွေ နဲ့ ဖိကပ် စုတ်လိုက် သောအခါ မျက်တောင်ကော့ကော့ကြီးတွေ တဖျတ်ဖျတ် လှုပ်ပြီး ပိတ်ကျသွား သည် ..။ အော်ကြီး ကျောပြင်ကို ဖက်သိုင်းလိုက်တဲ့ ဖြူသီခိုင် ရဲ့ လက်တွေ က ကျောပြင်ကြီးကို ပွတ်သပ်နေရာက အောက်ဘက်ကို တရွေ့ရွေ့ နဲ့ဆင်းချလာပြီး အော်ကြီး ရဲ့ တင်ပါးတွေကို ဆုတ်နယ် နေ သည် ..။ ဖြူသီခိုင် ရဲ့ အိပ်ခန်းကြီးထဲ က နှစ်ယောက်အိပ် ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ အော်ကြီး ပက်လက် အိပ်နေ သည် ..။ သူ့လ်ိင်တန်ချောင်းကြီးကို အရင်းကနေ ဆုတ်ကိုင်ပြီး ထိပ်ပိုင်း ဒစ်ကို လျာလေး နဲ့ ကလိလိုက်..စုတ်လိုက် လုပ် ပေးနေသော ဖြူသီခိုင် သည် ညှို့ဓါတ်အပြည့်ပါတဲ့ မျက်လုံး အစုံနဲ့ သူ့ကို စိုက်ကြည့်နေ သည် ..။
“ကြိုက်လား …” “ အင်း..ကြိုက်တယ်…မမ ” လိင်တန်ချောင်း ရဲ့ ထိပ်ဖျားကနေ အရင်းအထိ လျာ တဲ့ ယက်ပေးနေပြန် သည် . .။ ထိုနောက် ဂွေးစိနှစ်လုံး ကို ဆက်ပြီး ယက်ပေးပြန် သည် . .။ “ရပြီ..မမ..ချစ်ကြရအောင် ..အရမ်း ချစ်ချင်နေပြီ . . .” အော်ကြီး က တုန်ရီတဲ့ အသံ နဲ့ ပြောလိုက် သည် ..။ ဖြူသီခိုင် လဲ စုတ်ပေးနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး လေးဘက်ထောက် ပြီး တင်ပါးတွေကို ထောင်ပေး သည် . .။ သူမ ရဲ့ တင်ပါးတွေ ဒီလိုထောင်ပေးတာကို အရမ်း သဘောကျသည် လို့ အော်ကြီး က အရင်တခါတုံးက ပြောဘူးထား သည် . .။ အခုလဲ ဖြူသီခိုင့်တင်ပါးကားကားကြီးတွေကို အော်ကြီး ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ကြည့်နေ သည် ..။ တင်ပါးကြီးတွေ ရဲ့ကြားက အမြောင်းလိုက်ကြီး ပြူးထွက်နေတဲ့ ဖြူသီခိုင် ရဲ့ အဖုတ်ကြီး ကို ပွတ်ပေးလိုက်သော အခါမှာတော့ ဖြူသီခိုင် မျက်လုံးလေးတွေ မှေးစင်းကာ ကျသွားရ သည် ..။ အရေတွေ စိုစွတ် နေတဲ့ အဖုတ် ထဲ အော်ကြီး ရဲ့ လက်ညှိုး တုတ်တုတ်ကြီး တိုးဝင်ကာ မွှေနှောက်လိုက်သောအခါမှာတော့ ဖြူသီခိုင် ရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ ဘယ်ညာရမ်းနေရပြီး . .“ ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲကွယ် . .ချစ်မှာဖြင့် ချစ်ပါတော့ ..” လို့ ညည်းညူလိုက်လေ သည် . . ။ အော်ကြီး လဲ ဖြူသီခိုင်ရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ အနောက်တဲ့တဲ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင် ချလိုက်ပြီး.ဖေါင်းစူနေတဲ့ အဖုတ်မြောင်းကြီးကို သူ့လျာကြီးနဲ့ အပြားလိုက် ယက်ကော်တင်လိုက် ပါ သည် ..။ “အို ..အင်း..ဟင်းဟင်း ….. ” အိုး . .။
အပေါ်အောက် ဆက်တိုက်ဘဲ တပြတ်ပြတ်နဲ့ ယက်ပေးနေပြန်ပြီ . . ။ “တော်…တော်တော့ …ချစ်ပေးတော့ ..မမ ယားလှပြီကွယ် . . .” အော်ကြီး လဲ အဖုတ်ကြီးကို ယက်နေရာ က စအိုပေါက် ညိုညိုလေး ဆီကို ရွှေ့သွားပြီး လျာထိပ် နဲ့ စအိုပေါက်လေးကိုပါ ထိုးဆွ ကလိနေပြန် သည် . .။ “ အာဟာ……အား……အင်…….တော်ပြီ ဆို ….လုပ်တော့ …လိုးပေးတော့ . . ယားလှပြီ . . .” မရှက်တော့ဘဲ တအား တောင်းဆိုနေသောကြောင့် အော်ကြီး လဲ ဖင်ထောင်ပေးထားသော ဖြူသီခိုင့်ရဲ့ တင်ပါး တွေ ကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်ထဲကို သူ့လိင်ချောင်းကြီး ထိုးသွင်း ပေးလေပြီ…။ ဖြူသီခိုင် မှာ လိုချင်တာ ကိုရသွားလို့ ကျေနပ်သွားပြီး အော်ကြီး ရဲ့ ထိုးဆောင့်ပေးတာတွေကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံစားနေပါတော့ သည် ..။ အော်ကြီး လဲ ဖြူဖွေးတောင့်တင်းပြီး တဏှာကြီးသော ဖြူသီခိုင် ကို ကာမစပ်ရှက်ရတာ သဘောကျလှ သည် ..။ ဆောင့်ချင်တိုင်း ဆောင့်လေ ဖြူသီခိုင် က ကြိုက်လေ ဘဲ ..။ စံစံ ရဲ့ အဒေါ် မသက်သာ တာကြောင့် စံစံ တော်တော် နဲ့ ပြန်မလာနိုင် ..။ ဒီအတောအတွင်း အော်ကြီး သည် ဖြူသီခိုင် ကို ညတိုင်းလို သွားသွား ထောင်းပေး သည် . .။
ဆိုင်ကို ဖြူသီခိုင် က ကားနဲ့ လိုက်ပို့တတ်လို့ သက်ထား က “အော်ကြီးနော် . .စံစံ သိသွားရင် ..မိုးမီးလောင်မှာ ..ကြည့်လဲ လုပ်အုံး လို့ ” ပြော သည် ..။ ဒီနေ့ ဖြူသီခိုင် နယူးဂျာစီ ဘက်ကို သွားနေလို့ အော်ကြီး ကို ဆိုင်ပိတ်ချိန် ကားနဲ့ လာမခေါ်နိုင်ဘူး ..။ အော်ကြီး ကို ဆိုင်ပိတ် အပြီး သက်ထား က အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေး သည် ..။ ကားပေါ်မှာ သက်ထား က စံစံ သည် သဘောလဲကောင်း အလုပ်လဲတော် တဲ့ မိန်းကလေး ဖြစ်လို့ အော်ကြီး ကံကောင်းတာကြောင့် စံစံ့အပေါ် သစ္စာရှိရှိနဲ့ နေပြီး စံစံနဲ့ဘဲ လက်ထပ်လိုက်ဖို့ အကြံပေးလေ သည် ..။ သက်ထား က သူလဲ နောက်ကို အော်ကြီး အပေါ် အလုပ်လုပ်ဘက် မိတ်ဆွေတွေလိုဘဲ နေသွားတော့မည် လို့ ပြော သည် ..။ မေထိန် ပြန်ရောက်လာ သည် ..။ မေထိန် က သူ့ယောင်္ကျား ကိုကျော်စွာထွန်း မကြာခင် လိုက်လာမည် လို့ ပြောသည် ..။
မေထိန် မြန်မာပြည်က ရလာခဲ့တဲ့ အစားအသောက် အတွေ့အကြုံတွေ နဲ့ သူတို့ ဆိုင်မှာ မြန်မာ အစားအသောက်တွေ ပါ စမ်းသပ်ေ၇ာင်းကြည့်ကြ သည် ..။ ဒီအတောအတွင်း ..စံစံ ပြန်ရောက်လာ သည် ..။ မေထိန် သည် စံစံ နဲ့ အော်ကြီး ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေတာကို အရမ်းဘဲ သဘောကျ သဘောတူပြီး လက်ထပ်ကြဖို့ အကြံဥာဏ်ပေး သည် ..။ ကိုကျော်စွာထွန်း ဒီရောက်လာရင် ..စီးပွားတိုးချဲ့ကြမည် လို့ ပြော သည် ..။ အော်ကြီး က သူ့မှာ ရန်ညှိုးရန်စ က ရှိနေသေးလို့ ဒီ နယူးရောက်မြို့ကြီး မှာ မနေလိုတော့ဘူး ..တ ခြားပြည်နယ်မှာ ဆိုင်တဆိုင် ဖွင့်ပြီး စံစံ နဲ့ လုပ်ကိုင်စားမည် လို့ ပြောတော့ သက်ထားရော..မေထိန် ပါ သဘောတူကြလေ သည် ..။ …… ကျနော် သည် အလုပ်ကိစ္စတခု နဲ့ မြိုကလေးတမြို့ကို ရောက်ရှိသွားတော့ အမေရိကန်လူမျိုး တဦး က ဒီမြို့လေး မှာ မြန်မာဆိုင်တဆိုင် ရှိကြောင်း ပြောပြပြီး ..သူ အလွန်သဘောကျကြောင်း ..သွားစားကြည့်စေလိုကြောင်း အတန်တန် ပြောတာကြောင့် ကျနော် လဲ သူ့ဆီက လိပ်စာ တောင်းယူပြီး ကျနော့်အလုပ်ကိစ္စ ပြီးပြတ် သောအခါ ထို မြန်မာဆိုင် ကို ၀င်သွားကြည့်လိုက် သည် ..။
ဆိုင်လေး သည် သိပ် မကြီးလှပေမဲ့ ကားရပ်ဖို့ ကွက်လပ်လဲ ၇ှိပြီး အထဲဝင်လိုက်သောအခါ ထင်သလောက် မသေးလှဘဲ သန့်ရှင်း သားနားသော စားပွဲ ကုလားထိုင်များ နဲ့မို့ သဘောကျနေမိဆဲ အတွင်းခန်း မှ မိန်းမပျို တယောက် ထွက်လာ သည် ..။ ကျနော်လဲ မြန်မာ လက်ရှည်ရင်ဖုံး နဲ့ချိတ်ထမိန် ၀တ်ထားသော မိန်းမပျို ကို ကျနော်ဟာ မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်ပြီး .အလုပ်ကိစ္စ နဲ့ ဒီမြို့လေး ကို ရောက်ရင်း သတင်း ကြားလို့ ၀င်လာတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပြီး ထမင်းဟင်းများ မှာစား ပါ သည် ..။
မိန်းမပျို က အတွင်း မှာ ချက်ပြုတ်နေသော သူ့ယောင်္ကျား ကို လှမ်းခေါ်ပြီး သူတို့ လင်မယား က ကျနော် နဲ့ ထိုင်စကားပြောကြပါ သည် ..။ ကျနော် ရောက်သွားချိန် သည် နဲနဲ စောနေပြီး ဆိုင်ဖွင့်ခါစ မို့ လာရောက် စားသောက်သူ မရှိသေးလို့ သူတို့ လင်မယား ကျနော် နဲ့ စကားပြောချိန် ရတာ ဖြစ် သည် ..။ မိန်းမပျို က သူမ နံမည် သည် စံစံ ဖြစ်ကြောင်း နဲ့ သူမယောင်္ကျား က ကိုအောင်မင်းသိန်း ဖြစ်ပြီး လူတွေအားလုံး က ငယ်နံမည် ကိုအော်ကြီး လို့ဘဲ ခေါ်တတ်ကြောင်း ပြောပြ ပြီး ကျနော် နဲ့ ခင်မင်သွားကြ ပါ သည် ..။ ကျနော် သည် စံစံ နဲ့ ကိုအောင်မင်းသိန်း( ခေါ် ) အော်ကြီးတို့ လင်မယား ဆိုင် ကို ထိုမြို့ကလေး ကို ရောက်တိုင်း ၀င်စားတတ်တာကြောင့် သူတို့ နဲ့ ပိုမိုရင်းနှီးသထက် ရင်းနှီးလာခဲ့ ပါ သည် ..။ သူတို့ လင်မယား က သူတို့ သည် ယခင် က နယူးရောက်မြို့ မှာ ဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ကြောင်း ..ပြောပြခဲ့ သည် ..။ ကိုအော်ကြီး နဲ့ ရင်းနှီးလာကြတော့ ..တကြိမ်မှာ ကျနော် တည်းခိုသော ဟိုတယ် အခန်း ကို သူ့ကို ခေါ်ဖိတ်ပြီး ဘီယာသောက်ကြသောအခါ ကိုအော်ကြီး က ကျနော့်ကို သူ့ဘ၀ နောက်ကြောင်းများ ကို ပြောပြခဲ့ပါ သည် ..။
ကျနော် သည် ၀ါသနာ အရ ၁၈ ပလပ် ဇာတ်လမ်းများ ကို ရေးသားနေသူ ဖြစ်တာကြောင့် မိန်းမပေါင်းများစွာနဲ့ ကြုံတွေ့ ပတ်သက်စပ်ရှက်ခဲ့ သည့် ကိုအော်ကြီး ရဲ့ အတွေ့အကြုံ ဘ၀ဇာတ်လမ်းများ ကို ရေးသားလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာမိပေ သည် ..။ “ ကိုအော်ကြီး ..စံစံ နဲ့ လက်ထပ်ပြီး ဒီမြို့လေး ကို ပြောင်းလာပြီး ဆိုင်တွေဘာတွေ ဖွင့်ပြီး နောက် ခင်ဗျား..အရင်ကြုံခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ နဲ့ ထပ်တွေ့ဖြစ်..ထပ် ညိစွန်းတာတွေ ဖြစ်သေးလားဗျ…” လို့ ကနော် မေးကြည့်မိပါ သည် ..။
ကိုအော်ကြီး က ..“ ဆရာ့ကို မကွယ်ဝှက်ဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အမှန်အတိုင်း ပြောပြရရင်တော့…တဖက် က ဇာတ်လမ်း ဆက်ချင်တာမျိုးတွေတော့ ရှိခဲ့တယ် ဆ၇ာ.. ကျနော် လဲ ကျနော့်မိန်း မ အပေါ်သစ္စာမဖေါက်ချင်တော့ဘူး လေ ..ရှောင်ခဲ့ပါတယ် …” လို့ ဖြေ သည် ..။ “ စပ်စုလိုက်အုံးမယ် ..ဘယ်သူ က ဆက်ချင်တာလဲ ဆိုတာလေးများ ပြောပြနိုင်မလား..ကိုအော်ကြီး ..” “ ဆူရှီ သူဌေးမ ပေါ့ ဆရာ၇ယ် ..” “ ဖြူသီခိုင် လား …” “ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ ..ကျနော် က ဘာမှ မလုပ်တော့ဘူး ပြောလို့ အရင် က လင်ရှိမယားတွေတောင် မရှောင်ခဲ့တဲ့ ကျနော်က ပြောနေတာမို့ ..ကျား သက်သတ်လွတ်စားတယ် ပြောတာမျိုး ဆရာက ထင်ပြီး ယုံချင်မှ ယုံလိမ့်မယ် . တကယ်ပါ ဆရာ..ကျနော် ..အေးအေးဆေးဆေး ဘဲ နေနေပါပြီ …” “ ၀မ်းသာပါတယ် ကိုအော်ကြီး ..” ပြီးပါပြီ ..။
0 comments on “ကြော်တတ်တယ်..လှော်တတ်တယ် (ဇာတ်သိမ်း)”
← ကြော်တတ်တယ်..လှော်တတ်တယ် (အပိုင်းတစ်)
Total page view: 379,143